ပေးစာ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ပေးစာ. Show all posts
မူဝါဒ ဖြစ်စဉ်၊ အတိတ် နဲ့ ဗျူရိုကရေစီ ဇောင်းပေးသော မဟာဗျူဟာ
မိတ်ဆွေများ သို့ အိပ်ဖွင့် ပေးစာ (၃)
မူဝါဒ ချမှတ်တာ ဖြစ်စဉ် တခု ဖြစ်တာကို အရင် အပတ်က ကျနော် ပြောခဲ့ တယ်နော်။ ပုံနဲ့လည်း ပြခဲ့ပါတယ်။ ယူကေ အစိုးရ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဌာန က ထုတ်တဲ့ စာစဉ် တစ်ခုမှာ မူဝါဒ ချမှတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ခုလို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်တယ် အစ်ကိုလေးရ။ “နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် အတိုင်း လိုလားသော အပြောင်း အလဲများ တကယ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ယင်း ရည်မှန်းချက် ကို အစီ အစဉ်များ နှင့် ရလဒ်များ ရရှိနိုင်မည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ကြရသည်။
ထိုသို့ ပြောင်းလဲသော ဖြစ်စဉ်ကို မူဝါဒ ချမှတ်သော ဖြစ်စဉ်ဟု ဖွင့်ဆိုသည်။” တဲ့။ ဒီသဘောအရ၊ မူဝါဒ ချမှတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ဗျူရိုကရေစီ ကို ချန်ထားလို့ မရပေတော့ဘူး။
ကိုရီးယားမှာဆိုရင်၊ ဗျူရိုကရေစီက ရွေးကောက်ပွဲ အဖြေထွက်တာနဲ့ မဲနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီ ရဲ့ ကြေညာစာတမ်းကို ကြည့်ပြီး မူဝါဒနဲ့ အစီအစဉ်တွေရေး တက်လာမယ့် အစိုးရကို ပြကြရသတဲ့ဗျ။ တက်မယ့် အစိုးရက မကြိုက်ရင် ပြန်ရေးပေါ့ အစ်ကိုလေးရာ။ အလားတူပဲ မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ (think tank) တွေကိုလည်း ဘယ်လို ပြောင်းရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို အနိုင်ရပါတီက တောင်းတတ်သတဲ့။ မူဝါဒပညာရှင်တွေကလည်း အနိုင်ရပါတီ ရဲ့ ကြေညာစာတမ်းကို ကြည့်ပြီး ရေးသားပေးပို့ကြတယ်တဲ့။ အဲဒီ အရာရှိတွေနဲ့ ပညာရှင်တွေကို ဆိတ်ရဲ့ ဟိုအစေ့လို့ ဘယ်သူကမှ မစွပ်စွဲကြပါဘူးတဲ့။ ဒါကိုက သူတို့ အလုပ်ပေပဲကိုး အစ်ကိုလေးရဲ့။
အဲဒီသဘောတွေအတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗျူရိုကရေစီကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်နေသလား ဆိုတာ ကျနော် မကြာမကြာ တွေးမိတတ်တယ် အစ်ကိုလေး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အနာဂတ်အမြင်က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ အဲဒီကို ရောက်အောင်သွားဖို့ ဖြစ်တယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကောင်းကို ထူထောင်ချင်တယ်။ ဒါတွေ ဖြစ်လာဖို့ ဗျူရိုကရေစီနဲ့ ယုံကြည်မှု ထူထောင်ရေးက သော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပုံရတယ်။ လူထု အခြေခံပေါ်မှာ အားလုံးပါဝင်ရေးမူကို ကျင့်သုံးမယ်လို့ မြင်ကြတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို မိန့်ခွန်းတွေမှာ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ဒီအချက်တွေကို တွေ့ကြရမှာပါ။ အဲဒီအချက်တွေက အကြောင်းမဲ့ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရ၊ ဖြတ်သန်းနေကြရတဲ့ ဘ၀ နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ဘ၀က ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပြွမ်းတီးနေတဲ့ ဘ၀ပါ အစ်ကိုလေး။ သဘောတရားကို သန်တယ်။ အဖြူအမည်းပဲ ကြည့်တတ်တယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ နည်းနာပိုင်းအပေါ် လေးနက်မှု သိပ်မရှိလှဘူး။ ချရင် ကြိုက်တယ်။ ကြမ်းတယ်။ ရမ်းလည်း ရမ်းချင်တယ်။ ယုံကြည်မှုကလည်း အလွန့်ကို နည်းတယ်။ အကွဲ၊ အဟ ကြီးမားလှတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းပါ။ ဒီကနေ ကျနော်တို့ ပြန်ထနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြရတာ မဟုတ်လား အစ်ကိုလေး။
မူဝါဒအကြောင်း ပြောပြီဆိုတဲ့အခါ၊ အရင်အပတ်က ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ အပြင်၊ ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတဲ့ ဘ၀ကိုလည်း မေ့ထားလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ ကျနော် ထင်တယ် အစ်ကိုလေး။ ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် စောစောက ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပို စပ်ဆိုင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍနဲ့ မသက်ဆိုင်သလို ထင်ရပါတယ်။ အကွဲအဟ ကြီးမားတာနဲ့ ယုံကြည်မှု နည်းတာက လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ရှိနေပြီ ဆိုကတည်းက အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍမှာလည်း ရှိနေတော့မယ်ဆိုတာ နားလည်လို့ ရမှာပါ။ ရင်ကြားစေ့ရေး နဲ့ ယုံကြည်မှု ထူထောင်ရေးဆိုတာ ဗျူရိုကရေစီမှာလည်း ရှိပေတာပေါ့ အစ်ကိုလေးရယ်။
နိုင်ငံရေးအဆင့်နဲ့ ဗျူရိုကရေစီလို့ အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စနစ်ကြားမှာ အဟ ရှိတယ်လေ အစ်ကိုလေး။ အထူးသဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး နဲ့ အထက် ခန့်မှန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ၀န်းကျင်က စစ်တပ်က ပြောင်းလာကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ အပြန်အလှန် အထင်လွဲတာတွေနဲ့ စိုးရိမ်တာတွေ ရှိနေကြတယ်လေ။ ၀န်ထမ်းတွေကြားထဲမှာ စစ်ဘက် နဲ့ အရပ်ဘက် ဆိုတဲ့ အဟ က ရှိနေဆဲပါပဲ။ မကြာသေးခင်ကဆိုရင် ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်းက အတွင်းဝန်တွေကို ယခင် အစိုးရရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေလို့ သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့သေးတာ မဟုတ်လား။ ‘ဒေါက်တိုင်’ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမှာ နိုင်ငံရေး သမိုင်းကြောင်း ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဆရာ ရန်မျိုးသိမ်း ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်သွားပုံရပါတယ်။ တပ်ကလာကြတဲ့ အရာရှိကြီးတွေကတော့ အဲဒီ ‘ဒေါက်တိုင်’ အသုံးအနှုန်း ရဲ့ နောက်မှာ ‘ဖြုတ်၊ ထုတ်၊ သတ်’ သမိုင်းကြောင်း နဲ့ ဆက်နေတာကို မေ့ကြလိမ့်မယ် မထင်ဘူး အစ်ကိုလေးရ။
ဒီအခြေအနေတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိပြုမိတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သမိုင်းသင်ခန်းစာကို ယူထားပြီး ဖြစ်ကောင်းလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့အခါ၊ တက်လာတဲ့ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်တွေက အစိုးရ အရာရှိကြီးတွေ ကို နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် လက်ပါးစေလို့ ထင်မြင်ခဲ့ကြသေးတာကိုး အစ်ကိုလေးရ။ “ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ မှာ အမြဲတမ်း၊ သီးခြားလွတ်လပ်၊ စည်းကမ်းလိုက်နာသေ၀ပ်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစနစ် ရှိရပါမယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီပဲ အာဏာရလာ၊ ရလာ .. ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေက အစိုးရရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို ဆောင်ရွက်ကြပါလိမ့်မယ်။” တဲ့။ အစ်ကိုလေး ရေ..။ ဒီစကားကို ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု ပြောခဲ့တာပါ။ “ကျနော်တို့ အာဏာရခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တာအတွင်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစနစ်ရဲ့ ဒီ မရှိမဖြစ် အင်္ဂါရပ်တွေကို လက်ခံအသိအမှတ်ပြုဖို့ ကျနော်တို့ ပျက်ကွက်ခဲ့မိပါတယ်” လို့ ဦးနုက ဆိုတယ်ဗျ။ “ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစနစ်ကို ပါတီဝန်ထမ်းစနစ်အဖြစ် တကယ် မပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ သဘောသဘာဝကို ပျက်ပြားစေသော သဘော သက်ရောက်နိုင်မယ့် သဘောထားမျိုးတွေ၊ လုပ်ရပ်မျိုးတွေကို ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့မိကြပါတယ်” လို့ ဦးနုက ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၅ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ မူဝါဒ ကြေညာချက်မှာ ၀န်ခံခဲ့ပေတာပေါ့ အစ်ကိုလေး။ ၁၉၅၉ ဦးသာဒင်နဲ့ သမ၀ါယမ နဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ဖြန့်ဖြူးရေး ၀န်ကြီးဌာန အတွင်းဝန်တို့ ရဲ့အမှုမှာ “မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ နဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ သခင် နဲ့ ကျွန် သာမာန် ဆက်ဆံရေးမျိုးထက် ပိုလည်း မပိုခဲ့ဘူး၊ လျော့လည်း မလျော့ခဲ့ဘူး” လို့ တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ဆိုခဲ့ပါသေးသတဲ့ အစ်ကိုလေးရေ။ ၁၉၆၁ မှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ Report of the Public Services Enquiry Commission ကို ကိုးကားပြီး ကျနော် ပြောနေတာပါ။ ဒါက ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်နော် အစ်ကိုလေး။ အဲဒီနောက် တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက်ကနေ နှစ်ပေါင်း ၅၄ နှစ် ကြာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစနစ်ရဲ့ အခြေအနေကို အစ်ကိုလေး မှန်းဆသာ ကြည့်လိုက်ပါတော့။ အစိုးရသစ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဒီ သမိုင်းနောက်ခံနဲ့လည်း နားလည်ဖို့ မလိုပေဘူးလား အစ်ကိုလေး။
အစ်ကိုလေးရေ .. ။ အလေ့အလာ ကောင်းလှဆိုတဲ့ ပညာရှင်ဆိုသူတွေက အဲဒီ သမိုင်းကြောင်းကို အလေးအနက် ထားရကောင်းမှန်း သိပုံမရတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အစိုးရအသစ်က အလေးအနက် ထားပုံရတာပါပဲ။ အတွင်းဝန်တွေနဲ့ ညွှန်ကြားရေမှူးချုပ်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တခြား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေက ဒေါက်တိုင်တွေလို့ သုံးနှုန်းပြောဆိုတာ အစ်ကိုလေး ကြားဖူးရဲ့လား။ ၀န်ထမ်းတွေကို ဖြုတ်မှာ မစိုးရိမ်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့သေးတယ် မဟုတ်လား။ စာရေးတဲ့ ကိုမှူးဇော်ဗျာ။ သမ္မတရုံးရဲ့ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဗျာ။ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူအဖြစ်တောင် ခန့်ထားလိုက်သေး မဟုတ်လား။ အရင် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ထိပ်တန်းဝန်ကြီးတစ်ယောက်က .. မင်းကို ဖြုတ်မှာပဲ။ မင်းကြိုက်တဲ့နေရာကို တောင်းပြီး ခုကတည်းက ပြောင်းထားဖို့ အစိုးရအသစ် မတက်ခင်မှာ အကြံပေးပါသတဲ့။ ဒီတော့ ကိုမှူးဇော်က ကျနော်က ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းပါ။ တက်လာတဲ့ အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ အမိန့်အတိုင်း လုပ်ရမှာက ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရဲ့ အလုပ်ပဲ ဆိုပြီး၊ ပို့တဲ့နေရာ ကျနော် သွားမယ် .. ဘယ်ကိုမှ ကြိုမပြောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ အစ်ကိုလေးရ။ အရင်က ကိုမှူးဇော် လုပ်ခဲ့တာတွေ မှာ တိမ်းညွတ်မှုတွေ ရှိခဲ့မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူလည်း ရွေ့ဖို့ ကြိုးစားနေတာပဲ မဟုတ်လား။ ဦးနု ပြောခဲ့တဲ့ “အမြဲတမ်း၊ သီးခြားလွတ်လပ်၊ စည်းကမ်းလိုက်နာသေ၀ပ်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း” ဖြစ်ဖို့ကို မှူးဇော်မှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ဝန်ထမ်းမဆို ဖြစ်ချင်ကြတာပါပဲ။ ဘယ်သူမှ အတိတ်နဲ့ မကင်းနိုင်ကြတဲ့ အခြေအနေမှာ လူတိုင်း အပြောင်းအလဲထဲမှာ ပါဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိသင့်ပေတာပေါ့။ အဲဒီလို အခွင့်အလမ်းမျိုးတွေကို သေချာဖွင့်ပေးကြရတာပါ။ နိုင်ငံသစ်ကို သွားတဲ့ခရီးမှာ အဲဒီလို အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးရှိဖို့ မလိုပေဘူးလား။ မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အဲဒီလို အခွင့်အလမ်း မဖွင့်သင့်ဘူးလား အစ်ကိုလေး။
အစိုးရအသစ်က အတွင်းဝန်တွေနဲ့ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတွေကို အားကိုးမယ့် အရိပ်အယောင် တွေ့ရတော့ ဘ၀င်မကျဖြစ်ကြတာကို ကျနော် နားလည်နိုင်ပါတယ်။ အတိတ်ရဲ့ အရိပ်တွေက ရှိနေဦးမှာပဲလေ အစ်ကိုလေးရဲ့။ အဲဒီ အရိပ်ထဲကနေ အစိုးရ အသစ်ကို ဝေဖန်ကြတာလည်း ကျနော် နားလည်နိုင်ပါတယ်။ သာမာန်လူတွေပဲကိုး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသစ်ကို တည်ကြမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ အဲဒီ အတိတ်ရဲ့အရိပ်ကို ကျော်ကြည့်နိုင်ကြတယ် အစ်ကိုလေးရ။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု နဲ့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခါစ ခေါင်းဆောင်တွေတောင် အဲဒီလို ကျော် ကြည့်ဖို့ ခက်ခဲခဲ့ပေသကိုး လို့ ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကို ဖတ်မိတဲ့ အချိန်ကတည်းက ကျနော် တွေးခဲ့မိဖူးပေတာပေါ့။ ၁၉၆၁ မေ ၁၈ ရက်နေ့စွဲ နဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ကို တင်သွင်းတဲ့ ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ ရဲ့ နိဒါန်းပိုင်းမှာ ခုလို တင်ပြခဲ့တယ် အစ်ကိုလေး။
“[လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့နောက်] အုပ်ချုပ်သူ အသစ်များမှာ စိတ်အားထက်သန်စိတ်၊ ယုံကြည်စိတ် တချောင်းတည်းသော စိတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည်ဟူသော မစ်ရှင် စိတ်ဓာတ်များဖြင့် ပြည့်လျှမ်းနေခဲ့ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်များမှာ တိုင်းပြည်ကို လွတ်လပ်အောင် ဦးဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မြန်မာပြည်သစ် ဟူသော အနာဂတ်အမြင်ကို တကယ့် ပကတိဘ၀ အဖြစ်သို့ လျင်လျင်မြန်မြန် ပြောင်းလဲ မြင်ချင်သောဆန္ဒ ပြင်းပြခဲ့ကြပေသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ယခင်က အုပ်ချုပ်သူများနှင့် ပတ်သက်ခဲ့သော အတိတ်အကြောင်းကြောင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ အပေါ် သူတို့က သံသယ ရှိခဲ့ကြပေ၏။ သူတို့၏ အစီအစဉ်များကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများက စီမံဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုထားဖို့ တုံ့ဆိုင်းခဲ့ကြပေ၏။ အုပ်ချုပ်သူ အသစ်များမှာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ လိုပင်၊ မဟာ့မဟာ အလုပ်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ပုံမှန်ဘ၀ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ စုစည်းကျစ်လျစ်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် နည်းနာယန္တရားများ လုံလုံလောက်လောက် ရှိကြသည်တော့ မဟုတ်ပေ။ စိတ်ထဲမှာ ရှိသည့် ထိုသို့သော ဧရာမ အစီအစဉ်များ တကယ်ဖြစ်လာဖို့ အချိန်လိုအပ်သည် ဆိုသော အချက်ကိုတော့ ခေါင်းဆောင်များမှာ သူတို့၏ စိတ်အားထက်သန်မှုများကြောင့် မမြင်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ကြပေသည်။ ပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် သဘာဝအတိုင်း လိုအပ်သော အချိန်ကို သူတို့ စိတ်ပျက်ကြလေ၏။ ယင်းကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဘက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသောကြောင့်ဟု သူတို့က ဆိုကြလေ၏။ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုအပ်ချက် နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပြည့်ပြည့်၀၀ သူတို့ နားလည်သဘောမပေါက်နိုင်ခဲ့ကြပေ။ မလိုအပ်သော ကြိုးနီစနစ် ဟု ထင်မြင်သောကြောင့် ဖြတ်တောက်လိုက်သည်။ သို့သော် တကယ့်အဖြစ်ကတော့ အုပ်ချုပ်ရေး ပျက်ပြားသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပေ၏။ မရှောင်မလွှဲသာသော ရလဒ်ကတော့ တာဝန်ယူမှု နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိတော့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။”
အစ်ကိုလေးရေ ..။ ဒါ က စနစ် ရှိတယ်ဆိုခဲ့တဲ့ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဘယ်လို အခြေအနေ ဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ ကျနော် ပြောစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ အဲဒီ အခြေအနေကနေ အရည်အသွေးရှိမယ့် ဗျူရိုကရေစီကို ဦးတည်သွားကြရမှာ က အစိုးရ အသစ်ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကို တခါ ထပ်မကြော့သင်ပေတော့ဘူး။
အစ်ကိုလေးရေ .. မူဝါဒ ကို ချဉ်းကပ်တဲ့အခါ၊ ဗျူရိုကရေစီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မပေးဘဲ ချဉ်းကပ်လို့ရသလို၊ ဗျူရိုကရေစီ နဲ့ အတူ မူဝါဒ ဖော်ဆောင်မယ်လို့လည်း ချဉ်းကပ်လို့ ရပါတယ်။ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုစနစ် ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုတိယ ချဉ်းကပ်ပုံအတိုင်း ကျနော်တို့ သွားကြရမှာပါ။ မူဝါဒ ကို ချပေးတယ်ဆိုတာက စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒါကြောင့်လည်း အတွင်းဝန်တွေနဲ့ ဗျူရိုကရေစီကို နေရာပေးမယ့် အလားအလာတွေ တွေ့လာရတာ၊ မူဝါဒကို အလျင်စလို မလုပ်ဘဲ၊ ရက် ၁၀၀ အစီအစဉ်တောင် ဆိုင်ရာဌာနတွေကို အဓိကထား ရေးဆွဲစေလာတာတွေကို ကြည့်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံက ပိုမို ကျယ်ပြန့်တဲ့ ထောင့်ကနေ ချဉ်းကပ်နေတာ ဖြစ်ပုံရတယ်လို့ ကျနော် ပြောရင်၊ ကျနော် ပိုတယ်လို့ ဆိုမလား အစ်ကိုလေး။
တင်မောင်သန်း၊ နေ့ ၁း၅၈၊ ဇွန် ၆ ၂၀၁၆
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/155506
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, June 19, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ဆောင်းပါး, ပေးစာ
မူဝါဒ ကောင်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်တဲ့ ဖြစ်စဉ် နဲ့ ၀န်းကျင်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ အသစ်မှာ မူဝါဒ ပီပီ ပြင်ပြင် မရှိဘူးလို့ စင်ကာပူ ပွဲတက် ပညာရှင်တွေက ဝေဖန် ကြတယ်။ ဝေဖန်နိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ တစ်ရပ်မှာ မူဝါဒ တစ်ရပ် ပီပီ ပြင်ပြင် ရှိဖို့ လိုတယ် ဆိုတာ ဆီသည်မ လက်သုတ် အမြင် ဖြစ်လို့ ဒီစကားကို ထပ်တလဲလဲ ရွတ်နေတဲ့ ပညာရှင်ဟာ ဆီသည်မ လက်သုတ် ပညာရှင်ထက် မပိုနိုင်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသား ဘ၀က မန္တလေးမှာ အငြိမ့် လူပျက်တွေက အင်္ဂလိပ် စကားလုံး ပေါ်လစီကို ပေါ်စလီ လို့ ပျက်လုံး ထုတ်ကြတာ အကိုလေး မှတ်မိ မှာပေါ့။ အဲဒီ အသုံး အနှုန်းကို ယူသုံးပြီး တနည်းပြော ရမယ် ဆိုရင် အဲဒီ ပညာရှင် ဟာ ဆီသည်မ လက်သုတ် စင်တင် ပေါ်စလီ ပညာရှင်ထက် မပိုဘူး အစ်ကိုလေး။
ဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော်တို့ မှာ မူဝါဒကောင်း တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ် နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမှ မရှိတာကိုး။ အဲဒီ ဖြစ်စဉ် နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ကို အာဏာသိမ်း စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတွေက ဖျက်ဆီး ခဲ့ပြီးမှကိုး။ မူဝါဒ ချမှတ်တာ က ‘ငါ့သဘော’ ဖြစ်ပြီး၊ ဗျူရိုကရေစီ လို့ ပြောတဲ့ ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှု ယန္တရားက အနှစ်သာရ သဘောအားဖြင့် ‘ခိုင်းတာလုပ်’ ယန္တရား ဖြစ်တာ အစ်ကိုလေးလည်း သိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တချို့ က ကျွန်တော့် ကို ပြောကြ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ‘စာရေးကြီး သာသာပါ’ တဲ့။ အဲဒီတော့ ၀န်ထမ်းတွေ က ‘အမိန့်စောင့် ၀န်ထမ်း’ တွေ ဖြစ် ခဲ့ကြရတာ ဘာဆန်း သလဲ အစ်ကိုလေးရာ။ ၀န်ထမ်းတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ စနစ်ကြောင့် ဒါတွေ ဖြစ်ရတာပါ။
ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ကို သတိရမိပါရဲ့ အစ်ကိုလေးရေ။ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ မှာ မြန်မာပြည်ကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဝင် လာပြီး တဲ့နောက် အီးဂရက်စ် က ဦးလှမောင်ရွေ တို့ ခေါ် သွားလို့ နေပြည်တော် က အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းများ မူဝါဒ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကို လေ့လာခွင့် ရပါတယ်။ ၀င်ဆွေးနွေးပါ လို့ တိုက်တွန်း တာနဲ့ ကျွန်တော် ၀င်ဆွေးနွေး ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ထိုင်လိုက်ရော၊ ကျွန်တော့်ဘေး မှာ ထိုင်နေတဲ့ အခြား ၀န်ကြီးဌာန က ညွှန်မှူး တစ်ယောက် က ကျွန်တော့် ကို ပြောတယ်လေ .. သိပ်အလေး အနက် မထားပါနဲ့ ဆရာတဲ့။ ခု ပြောနေတဲ့ မူဝါဒ ဆိုတာကလည်း နောက် ၂ နှစ် ၃ နှစ် ကြာရင် ဘာမှ မဟုတ်တော့ ဘူးတဲ့ အစ်ကိုလေးရာ။ ဂျာမန် အစိုးရ နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အဖွဲ့ ဂျီအိုင်ဇက်က ဦးစီး ဖော်ထုတ် ပေးနေတဲ့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲဗျ။
မူဝါဒ အပေါ် ယုံကြည်ပုံများ ပြောပါတယ်။ ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် က။ ၂၀၁၃ နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ထင်ပါရဲ့ အဲဒီ က စပြီး ပညာရေး မူဝါဒ အတွက် အလုပ်အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ပြီး ဆောင်ရွက် ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် နာမည် မပြောတော့ဘူး အစ်ကိုလေးရာ .. အရပ်ဘက် က၊ တက္ကသိုလ် မှာ ဆရာ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရာရှိကြီး တစ်ယောက် ကို မေးကြည့်တယ် ..
ခုလုပ်နေတာ ဘယ်လို ထင်သလဲလို့။ ထုံးစံအတိုင်း နေမှာပါ ဆရာ ရာ လို့ ပြောတယ်ဗျ။ မူဝါဒ ကိစ္စ ဆိုတာ အင်မတန် ပျင်းရိ ညည်းငွေ့စရာ ကောင်းပြီး၊ တကယ်လည်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တဲ့ အနှစ်မဲ့ ကိစ္စတွေလို့ အဲဒီ တုန်းက နားလည် ကြပေတာပေါ့။ အဲဒါ ကို အင်္ဂလိပ် လိုတော့ blah .. blah လို့ ပြောတယ် မဟုတ်လား အစ်ကိုလေး။ မြန်မာလို အသံ ဖလှယ် လိုက်ရင် အဲဒီ မူဝါဒ ထုံးစံ ကိစ္စကြီး ကို “ဗလာ .. ဗလာ” လို့ ဆိုရပေ မှာပေါ့။ အဲဒီ ဗလာ၊ ဗလာ စနစ်ကြီး ကို ခုလို ယှဉ် ပြနိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့။
အုပ်ချုပ်မှုကောင်းအစဉ် အားနည်း (သို့) မရှိ
စစ်အစိုးရ အောက် က စခဲ့ပြီး၊ ခုထိ လွှမ်းနေဆဲ စနစ် မှာ မူဝါဒ ဟာ ၀န်ကြီး ကိစ္စ လို့ ပဲ ၀န်ထမ်းတွေ က သဘောထားကြပါတယ်။
ဒါ .. ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် အစ်ကိုလေးရ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀န်ကြီး က မူဝါဒ ကို နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်တာကိုး။ ဒီ ဗလာ .. ဗလာ စနစ် နဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကောင်း ရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ လုပ်ထိုက်မလုပ်ထိုက် နဲ့ အကျိုးရှိမရှိ ဆန်းစစ်တာပါပဲ။
၀န်ကြီးကလည်း နိုင်ငံရေး အရ၊ သူလုပ်ချင်တာ အပေါ် ဗျူရိုကရေစီ က အဲဒီလို ဆန်းစစ်ပေးတာ ကို လက်ခံသလို၊ ဗျူရိုကရေစီမှာလည်း အဲဒီလို ဆန်းစစ်ပေးနိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ၊ စနစ် နဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွေ ရှိပြီး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အဲဒီ ဆန်းစစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ် က ဗျူရိုကရေစီ မှာ မရှိဘူး။ ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် အားနည်းလွန်းလှတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ မူဝါဒတစ်ရပ် ကနေ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ခုလို ပုံ နဲ့ ပြ ဖော်ပြနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
အစ်ကိုလေးရေ .. ဖြစ်နေခဲ့တာကတော့ ၀န်ကြီးက ဒါ ဖြစ်ချင်တယ် ပြောလိုက်တာနဲ့ တန်း အကောင်အထည် ဖော်ရတော့တာပါပဲ။ ခုတော့ ၀ိုင်းစဉ်းစားကြတဲ့ အဆင့် ကို ရောက် လာပြီ လို့ မျှော်လင့်ရပေမယ့်၊ အားကောင်းပုံတော့ မရသေးပါဘူး။ အထက်မှာ ၀ိုင်းစဉ်းစားတာ ကနေ အင်္ဂါစုံအောင် ရွေ့ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ မူဝါဒကောင်းတစ်ရပ် ချမှတ်နိုင်ဖို့ ဆိုရင်၊ နိုင်ငံရေး အဆင့် အစိုးရ (၀န်ကြီး)၊ ဗျူရိုကရေစီ နဲ့ လူထု ကြား အပြန်အလှန် ပြောဆိုနိုင် ဆက်ဆံ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ တည်ဆောက်ပုံတွေ၊ ယန္တယားတွေ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက်ထက်မှာ ဌာနတွေ အနေနဲ့ လူထု အသံတွေကို နားထောင်ဖို့ အထက်ကခိုင်းတဲ့ အသံတွေကျယ်လောင်ခဲ့ပေမဲ့၊ ကိုယ့်ဌာနအတွင်း က ၀န်ထမ်းတွေ ရဲ့ အသံကိုတော့ အထက်အဆင့်ဆင့် က နားထောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု ကို မရှိခဲ့ဘူး လို့ အဆင့်အသီးသီးက ၀န်ထမ်းတွေက ပြောကြတာကို ကျွန်တော် အများကြီး ကြားခဲ့ရတာပေါ့ အစ်ကိုလေးရာ။
လူထု က ရချင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု က အထက် မှာ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ် ရဲ့ ရလဒ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခု စင်ကာပူ မှာ ဝေဖန်တယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ဆိုတာ က အစသာရှိသေးတာပါ။ ပညာရှင်တွေ က ဝေဖန်ကြတဲ့အခါ၊ အဲဒီ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုလုံး ပျောက်နေတာ ကို မေ့နေကြပုံရပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ က အနောက်ကျကြီးကျခဲ့တာမို့ မူဝါဒရေးရာ နဲ့ ပြောရရင်၊ အစိုးရ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု သိပ်ကွာခြားမယ် လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး အစ်ကိုလေး။
ကွာခြားနိုင်တာကတော့ ဖြစ်စဉ်တည်ဆောက်ရေး အပိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်စဉ်တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုရင် ၀န်ထမ်းတွေ ရဲ့ ယုံကြည်မှု ထူထောင်ရေး က အဓိက ကျလှပါတယ်။
မူဝါဒ ကို ရွေးချယ်ချမှတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ၀န်ထမ်း အကြီးအကဲတွေ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်မှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေတာ ဟာ ရလဒ် မဟုတ်ဘူး၊ ဖြစ်စဉ်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်မှု ကို လေ့လာတဲ့ သုတေသနတွေ က ဆိုတယ် အစ်ကိုလေး။ မူဝါဒ လေ့လာတဲ့ ပညာရှင်တွေ က မူဝါဒ ကို ထိုးပေးချင်တတ်ကြတယ်။ ဖြစ်စဉ် ကို တည်ဆောက်ပြီး၊ အဲဒီ ဖြစ်စဉ် ကနေ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် မူဝါဒ ဖြစ်ဖို့ နည်းနည်းမှ အလေးမထားကြတာ ကို ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် အစ်ကိုလေးရ။
တကယ်တော့လည်း ကျွန်တော်တို့ ၀င်လာတဲ့အခါမှာ အစိုးရ အပြောင်းအလဲထက် မူဝါဒ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်ကို တိုင်းပြည် က မဆိုးလောက်ဘူး လို့ ယူဆပြီး ၀င်လာခဲ့ကြတာပါ။
ဒါ ကို သံတော်ဆင့် အင်တာဗျူးမှာလည်း ကျွန်တော် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် အစ်ကိုလေး။ ဒါပေမဲ့ ဗျူရိုကရေစီ ကို ထိတွေ့ နားလည်လာတဲ့အခါ မူဝါဒ နဲ့တင် မလုံလောက်တော့ဘူး ဆိုတာ နားလည်သွားပါတယ်။ မူဝါဒ ပြောင်းသွားတာ နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေလည်း ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဥပမာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး မှာ လယ်သမားတွေ စပါးသာမက ကိုယ်စိုက်ချင်ရာ စိုက်ခွင့် မူဝါဒမျိုး က အပြောင်းအလဲ ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီမူဝါဒ ကို ဘယ်လို အစီအစဉ်မျိုး နဲ့ အားပေးမှာလဲ ဆိုတာကျတော့ တည်ဆဲ ဖွဲ့စည်းပုံ နဲ့ စနစ် အတိုင်း ဆက်သွားလို့ကတော့ တယ်ထိရောက်လှမယ် မဟုတ်လေဘူး။ ၀န်ထမ်းတွေ က ဦးဆောင်သူတွေအပေါ်၊ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ စနစ်အပေါ်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ် အားထားယုံကြည်မှု မရှိရင် အကောင်အထည်တွေ့ရဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ယုံကြည်မှု က အဓိက ကျပြီး၊ အတိတ် နဲ့ ခွာနိုင်မယ့် သူတွေကိုသာ ၀န်ထမ်းအများစု နဲ့ ပြည်သူ က ယုံကြည်လိမ့်မယ် ဆိုတာ အဲဒီ စက်မှု ၀န်ကြီးဌာနမှာ လုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကစပြီး၊ ကျွန်တော် ရိပ်မိလာခဲ့ ပေတာပေါ့ အစ်ကိုလေးရာ။
ရေးဘူးပေါက်တာ မပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ် ဆိုတာ မြန်မာပြည်အနေအထား နဲ့ ကိုက်တယ် မထင်ပါဘူး။ ဖြစ်စဉ်တွေ ကို တည်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အချိန် မှာ ပိုလို့တောင် မကိုက်ဘူး လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ ကို စဉ်းစားတဲ့အခါ၊ ဖြစ်စဉ်လား၊ ရလာဒ်လား ဆိုတာ မြန်မာပြည်အတွက် အခြေခံကျတဲ့
အစ်ကိုလေး။ ဒီ အခြေခံ ပြဿနာ ကို ထည့်မတွက်ဘဲ၊ ရလာဒ် ဖြစ်တဲ့ မူဝါဒ အပေါ်ချည်း အာရုံပြုနေမယ်ဆိုရင် ပညာရှင်တွေ ဟာလည်း ရလာဒ်ပဲ လိုချင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ရဲ့ လားရာအတိုင်း ဂျောင်းကြရလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော် ယူဆကြောင်းပါခင်ဗျာ။
တင်မောင်သန်း၊ ညနေ ၅း၀၉၊ ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၆
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/155285
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 18, 2016 No comments:
ကျောက်မြောင်းမှာ ရေမလာတာ ကြာပါပြီ ဘယ်သူ့ကို ပြောရမှာလဲရှင်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်၊ တာမွေ မြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်းမှာ နေတဲ့ မစိမ့်မို့မို့ ရေးလိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ စာရေး ခဲ့သူဟာ ဌာန တစ်ခုက ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး သူနေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ သူအပါ အဝင် ပြည်သူတွေ တွေ့ကြုံ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခ အခက် အခဲကို မခံစားနိုင် တော့လို့ တာဝန်ရှိ သူတွေ သိအောင် ဖော်ပြပေးဖို့ စာဖတ်သူ ဏ္ဍကို စာရေးပေးပို့ ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူနေထိုင်တဲ့ တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ အရပ်မှာ ရေမလာတာ တစ်လနီးပါး ရှိပြီမို့ ပြည်သူတွေမှာ အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုရေမလာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကတည်းကလည်း ရေက လာချင်တဲ့ရက်မှ လာပါတယ်။ ရေရတဲ့အချိန်ကလည်း ည ၁ နာရီ ၂ နာရီမှာ မအိပ်ဘဲ ရေစောင့်တင်ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာ နှစ်နဲ့ ချီနေပါပြီး။ ဒါပေမယ့် လာလိုက်မလာလိုက်နဲ့က သည်းခံလို့ ရပါသေးတယ်။ အခု မြေညီအထပ် အချို့မှာတောင် ရေလုံးဝ မရတာ ရက် ၂၀ ကျော်နေတဲ့ အိမ်ခန်းတွေ ရှိနေတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
အခုတလော သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နဲ့ အင်တာနက်တွေမှာ မီးမလာလို့ လူတွေ အခက်အခဲဖြစ် တာ၊ ဒေါသဖြစ်တာတွေကို ကာတွန်း သရော်စာနဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ရေးနေ ကြသလို ဖေ့စ်ဘုတ်မှာလည်း သူတို့ခံစားနေကြရတာကို ရေးနေကြတာ ဖတ်ရ၊ ကြည့်ရပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားနေရပေမယ့် မီးမလာတာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေသေးလို့ အဆင်မပြေတာ၊ မကြာခဏ နေ့စဉ် မီးပျက်နေတာပါဆိုပြီး ဖြေတွေးလို့ ရပါတယ်။ ရေမလာတာကိုတော့ သည်းခံလို့ မရပါဘူး။
မီးမလာရင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း၊ မီးသွေးနဲ့ ချက်ပြီး နေလို့ရပေမယ့် ရေမလာတဲ့အခါ ချက်ပြုတ်ဆေး ကြောဖို့နဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့ အတွက် ရေမရှိရင် လုံးဝ မဖြစ်ဘူး ဆို့ ပြောပါတယ်။
သူသိထားတာကတော့ ရေကိစ္စအတွက် စည်ပင်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကောက် တဲ့ အခွန်အခ မှန်သမျှကိုလည်း ပြည်သူတွေက ပေးဆောင်နေ ကြရတာပါ။ ရေ မရှိလို့ ရေသန့်ဘူး ဝယ်ပြီး သုံးရတာ လခစား ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် အလွန်ပဲ အခက်ကြုံ ရပါတယ်။ အထပ်မြင့်မှာနေတဲ့ သူတွေမှာ ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်တာကို တာဝန်ရှိသူများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြည့်ရင် တွေ့မှာပါလို့ ရေးပါတယ်။
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ရေမရတဲ့ အရပ်ဒေသတွေကို အလှူရှင်တွေ သွားရောက် လှူဒါန်းနေကြတာ တွေ့တော့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေချင်း အတူတူ ရေအတွက်
သောက ရောက်နေကြရတဲ့ ကျောက်မြောင်းက သူတို့ကိုလည်း လာလှူကြရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိပါသေး တယ်။
လှူတာရရင်လည်း ခဏပဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ အမြဲရေရအောင် လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သူနေတဲ့ ကျောက်မြောင်း မဂ္ဂင်လမ်းက အခြားလမ်းတွေထက် ရေမရတာ ပိုဆိုးပါတယ်။
ညသန်းကောင်အထိ မအိပ်ဘဲ ရေတင်ရတာက နေ့စဉ် ဖြစ်နေတော့ ပြည်သူတွေမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ရတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံတွေ့ရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ပြည်သူတွေ အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သူနေတဲ့ လမ်းရေမရတာက အရင်အစိုးရ လက်ထက်မှာကတည်းက ဖြစ်ပြီး အခု ပြောင်းလဲ သွားတဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ ကျောက်မြောင်းက ပြည်သူတွေ ရေအခက်အခဲ ဖြစ်နေတာကို ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတာကြောင့် စာရေးပေးပို့ ခဲ့တာကို ဖော်ပြပေးစေ လိုပါတယ်လို့
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14618
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 28, 2016 No comments:
ဆင်းရဲသား လူနာနှင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး
နိုင်ငံတော် တာဝန်ရှိသူ အားလုံးနင့် လွတ်တော်များက အမတ်ဆိုတဲ့ လူတွေ သိစေချင်လို့ ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင် ဖတ်ပြီးလည်း ရှယ်ပေးကြပါ။
အားကို တကြီးနဲ့ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဆီ ရောက်ခဲ့တယ်။ လူနာက အရေးကြီး တယ်တဲ့။ သူတို့ ပါးစပ်က ပြောထွက် တာပါ။
ဒါဆို ပါရဂူတို့ သမားတော်တို့ ဆိုတာ တွေက ဘာလို့ တချက်လေး လာမကြည့် တာလဲ။ ကိုယ်ပိုင် ဆေးရုံးတွေမှာ အချိန်ဖြုန်း နေမှန်း သိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို့က တောသားဗျ ။
ဆေးရုံ အမည်ခံပြီး ဇိမ်ခံနေဖို့ ငွေကြေး ပေါနေတဲ့ ခရိုနီတွေ မဟုက်ဘူး။ နောက်ပြီး အရေးကြီး လူနာကို သက်ဆိုင်ရာ သွေးဌာနကို ပို့လိုက်ပါ လို့ပြောတာကို
ဘာလို့ nurse တွေက အရေး မလုပ်တာလဲ။ သူတို့ပြောတာက ၁ နာရီ ကတည်း ကလေ ကျုပ်တို့ စောင့်နေတာ ညနေ ၄ နာရီ ထိုးနေပြီ။
၄ နာရီလဲ ထိုးရော သွေးဌာနက ပိတ်ပြီတဲ့။ ဟင် ဒါဆို ကျုပ်တို့က လူနာ ဖောက်နေ တာကို ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်နေ ရမှာပေါ့။ ဒီမယ် ကျုပ်တို့က ရောဂါ သက်သာစေ ချင်လို့
ဟိုးအဝေးကြီ ကနေ လာတာဗျ။
ခင်းဗျားတို့ အချိန်ဖြုန်း နေတာကို လာကြည့်ဖို့ မဟုက်ဘူး။ အရေးကြီး လူနာကို junior ဆရာဝန် တွေ ကုနေတာ လာကြည့်ဖို့ မဟုက်ဘူး။ ဒီလို့နဲ့ ပါရဂူ သမားတော် အမည်ခံ
ခရိုနီ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ငွေ မက်မောမှု၊ nurse တွေရဲ့ အချိန် မလေးစားမှု နဲ့ အတူ ကျွန်တော်တို့ ရွာရဲ့ ဆည်းလည်းလေး တလုံး English major ရဲ final ကျောင်းသူလေး တယောက်ရဲ့ အသက် စတေး ပေးခဲ့ရတယ်။
ဘယ်သူမဆိုး အလောင်း ကိုတော့ ကိုယ့်ရွာ ပြန်သယ် ချင်ကြတာပဲ။ ဒီအတိုင်းအလောင်းကို သယ်လို့ မရဘူးတဲ့။ သယ်ချင်ရင် ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ညှိပါတဲ့။ မနက်မှဆိုပဲ။
ခုမှ နာကြပ် တခါ လာမထောက် ဘူးတဲ့ ဘယ်ဆီ သေနေမှန်း မသိတဲ့ ခရိုနီ ကြီးဆီက ပါမစ် တောင်းခိုင်း နေတယ်။ ကျုပ်တို့က အညာပြန် ရမှာဗျ။ ဆုံးသွားတဲ့ လူနာကို တညလုံး လက်ပိုက် ကြည့်နေအောင် ကျုပ်တို့ အသဲ မမာသေးဘူး။ ခုချက်ချင်း သယ်ချင်ရင် မျှော်လင့်ချက် မရှိလို့ လက်လျှော့တယ် ဆိုပြီ လက်မှတ် ထိုးပါတဲ့။
တောက်! ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်လိုက်တာ။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်မပါတဲ့ လက်တချောင်းနဲ့ သူတို့ အသက်ဖို့ ကျုပ်တို့ လက်မှတ် ထိုးခဲ့ရတယ်။
ပါရဂူ သမားတော် အမည်ခံ ကိုယ်ပိုင် ဆေးရုံတွေမှာ အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ ခရိုနီ စိတ်ဓာတ် ပိုင်ရှင်တွေ အမြန်ကျရှုံးပါစေ။
အချိန် မလေးစားတဲ့ nurse တွေ အမြန် ကျရှုံးပါစေ။
Originally published at - https://www.facebook.com/thirizaya.nawyahtar
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, May 27, 2016 No comments:
ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ၁၈ နှစ်နဲ့ ခန့်မယ်ဆိုတာ မူကြိုကလေးကို အလယ်တန်းစာ သင်ခိုင်း သလိုပါပဲ
မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်၊ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်မှာနေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေတင်က မေးလ်နဲ့ စာတစ်စောင် ပေးပို့ လာပါတယ်။
စာထဲမှာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်း အရာ ကတော့ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူ့အမြင်ကို စာရေးသား ပေးပို့ ခဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဥပဒေနဲ့ ဘွဲ့ရ ခဲ့ပေမယ့် ရှေ့နေ မလုပ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ အထူးသဖြင့် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူဘာကြောင့် စိတ်ဝင်စားရသလဲဆိုရင် သူဟာ ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်လုံခြုံရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လိုလားသူ ဖြစ်လို့ပါလို့ ရေးပါတယ်။ ဒီနေ့ထုတ် သတင်းစာတစ်စောင်မှာ ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများရဲ့ အသက်ကို (၂၅)နှစ်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားတာကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သီရိရတနာက ဆွေးနွေးရာမှ လူငယ်များကို နိုင်ငံ၌ နေရာပေးနိုင်ရန် အသက်(၁၈)နှစ်အထိ ပြင်ဆင်ရန် စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရတာကို ပြောချင်တဲ့အတွက် စာရေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ နောက်တက်လာတဲ့ အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပီပြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ပြည်သူပါဝင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် ရပ်/ကျေးအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုပဲ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ မဲပေးရွေးချယ် နိုင်ခဲ့ပြီး မြို့နယ်၊ ခရိုင်နဲ့ တိုင်းတို့က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနက ဝန်ထမ်းတွေ ကိုသာ အဓိကထားပြီး ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုတာ သူရွေးချယ်ခံရတဲ့နေရာက ပြည်သူတွေရဲ့ ရပ်ရွာအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ဝင်ရောက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အထက်အဆင့်ဆင့်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဝင်ရောက်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြရတာကို တွေ့မြင်နေ ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူငယ်စဉ်က နေထိုင်ခဲ့တဲ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဆို အရင် ရပ်ကွက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ အခု ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေရာက လူတွေ လမ်းလူကြီး ကော်မတီဝင်ဆိုတဲ့ လူကိုတောင် ရပ်ကွက် ကလူတွေ လမ်းကလူတွေက ချစ်ကြောက်ရိုသေကြပါတယ်။ လမ်းထဲမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာရှိရင် ရဲစခန်းတွေ၊ တရားရုံးတွေအထိတောင် မသွားခဲ့ရဘဲ နေရာမှာတင် ပြီးခဲ့တဲ့ အမှုကိစ္စ တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြောချင်တာက အုပ်ချုပ်သူတစ်ယောက်ကို သူ့မှာ သီလ၊ သမာဓိနဲ့ အကျင့်သိက္ခာအပြင် ဘယ်လောက်အရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသလဲဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မူ တည်ပြီး ရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လူငယ်တွေကို နေရာပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို သူ လက်ခံပါတယ်။ လူငယ်ဘဝကနေ ရလာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ လူကြီးဖြစ်လာမယ့်အချိန်မှာ နိုင်ငံ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာလည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၈ နှစ်ဆိုတဲ့ အသက်အရွယ်ဟာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာကို ဦးဆောင်ဖို့ မဆိုထားနဲ့ သူ့မိသားစု အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အလွန် ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်လို့ ရေးပါတယ်။
၁၈ နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာ အရွယ်ရောက်ပြီး မဲပေးလို့ရပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး အသက် သတ်မှတ်ချက်အရ သူ့ပညာရေးဟာ ဒုတိယနှစ်သာ ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပညာရေး ဆုံးခန်းမတိုင်ခင်မှာ တာဝန်ပေးလိုက်ရင် သူ့ပညာရေး အညွှန့် ကျိုးသလို ဖြစ်သွားမှာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနေ့အချိန်အခါမှာ လူတွေဟာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြရတဲ့ လူမှုဘဝ ဒုက္ခတွေကြောင့် ဒေါသ၊ မောဟာ၊ လောဘတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုမိုမြင့်တက်လာနေကြပါတယ်။ ဘဝပြဿနာတွေကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားမှုတွေ နည်းလာသလို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပေါ်မှာလည်း အကြင်နာတွေ မေတ္တာတွေ ထားရှိမှုတွေလည်း ပျောက်ဆုံး လာနေပါပြီ။
ဒါတွေကို ဟန့်တားနိုင်ဖို့၊ အသိပညာပေးနိုင်ဖို့ ၁၈ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသူက လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ အရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၂၅ နှစ်ရောက်ဖို့ ၇ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလကို ဖြတ်သန်းရင်း ပညာနဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အသိအမြင်တွေ က ရင့်ကျက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ အချိန်ကောင်း တစ်ရပ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၈ နှစ်ကိုမှ အတင်းခန့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်ထားစေချင်ပါတယ်။
လူငယ်ဆိုတာ ရိုးသားဖြူစင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ လူငယ်တွေဟာ သူတို့ခေတ်က လူငယ်တွေထက် ပိုပြီး အတွေးအခေါ်၊ အသိအမြင်နဲ့ ပညာရည်တွေ ထူးချွန်ထက်မြတ်တာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူကြိုကျောင်းတက်တဲ့ ကလေးကို အလယ်တန်းအဆင့် စာမသင်ပေးစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ၁၈ နှစ်လို့ မပြင်ဘဲ အရင်အတိုင်း ၂၅ နှစ်သာ ထားသင့်ကြောင်း ပြည်သူတစ်ဦးရဲ့ အမြင်နဲ့ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14464
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, May 23, 2016 No comments:
ဈေးဝယ်ရင် အလေးချိန်ပြည့်ရအောင် ဘယ်သူ့ကို ပြောရမှာလဲရှင်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်၊ သင်္ကန်းကျွန်း မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ မအေးသူဇာချစ်က မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို မေးလ်နဲ့ စာတစ်စောင် ပေးပို့ ခဲ့ပါတယ်။
ပေးပို့ခဲ့သူဟာ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သူရေးသား ပေးပို့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြို့နယ် အသီးသီးက စည်ပင်ပိုင် ဈေးတွေမှာ ရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်နဲ့ ရောင်းချ သူတွေသာ မက လမ်းဘေး ဈေးသည်တွေ အပါအဝင် ချိန်တွယ် ရောင်းချတဲ့ အလေး တင်းတောင်း တစ်ပြေးညီ ဖြစ်စေဖို့ အကြံပြု ရေးသား ပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးခဲ့သူဟာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ရုံမက အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် နေ့စဉ် စားသောက်ဖို့ အတွက် နေ့တိုင်းနီးပါး ဈေးဝယ် ရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ နေတာက သင်္ကန်းကျွန်းပေ မယ့် သွားလာရင်း ကြုံတဲ့နေရာမှာ ဈေးဝယ်လေ့ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူငယ်စဉ်က အဖွားဈေးသွားရင် လိုက်သွားနေကျမို့ အခုခေတ်ဈေးဝယ်သလို မဟုတ်တာကို သတိထားမိပါတယ်။ အဓိကကျတာကတော့ အလေးချိန်ခွင် ပါပဲ။
ဈေးဝယ်သူက ဈေးရောင်းသူပြောတဲ့ ဈေးနဲ့ ဝယ်ရတာဖြစ် ပြီး သူချိန်ပေးတဲ့ အချိန်အတွယ် အတိုင်း ယူကြ ရပါတယ်။
သူက ဈေးဝယ်နေကျမို့ ဘယ်ပစ္စည်းဝယ်ရင် ဘယ်လောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းနိုင်တာမို့ မပြည့်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ဈေးသည်ရဲ့ ကြိမ်းမောင်းဆဲတာကို နှစ်ခါ သုံးခါ ခံခဲ့ရဖူးသူမို့ ဒီလိုမျိုးမကြုံချင်တာကြောင့် သူတို့ပေးသ မျှပဲ ယူခဲ့တာ ဈေးစဝယ်ချိန်ကနေ အခုထိပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ကြုံတွေ့ရတာက အပြင်ဘက်တန်းမှာ ရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည်တွေ အများအားဖြင့် သားငါးရောင်းချသူတွေပါ။ သူတို့တွေအပြင် ဈေးဆိုင်ခန်းတွေက ဆိုင်အချို့ကလည်း အလေးမပြည့်တဲ့ ဆိုင်အချို့ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့ အိမ်ထောင်စုတိုင်းက ဈေးဝယ်ကြရတာပါ။ ကိုယ်ပေးတဲ့ ငွေနဲ့ တန်တဲ့ပစ္စည်း မရတာကို နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ ခံစားနေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလေးချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိဖို့ အုပ်ချုပ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဈေးအပြင်တန်းတွေမှာ ဈေးသည်တွေ ဟီးထနေပေမယ့် ဈေးအတွင်းထဲက ဆိုင်ခန်းတွေက တော့ ကွက်လပ်အလွတ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ နေရာမရှိလို့ မရောင်းတာထက် ရှိရက်သားနဲ့ မရောင်း ကြတာက မဖြစ်သင့် ပါဘူး။
ဈေးပီပီသသနဲ့ ရောင်းဝယ်ရင် အလေးပြည့်မပြည့် ချိန်တဲ့ သမာဓိချိန်ခွင် ရှိပါမယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေက မကြာခဏ စစ်ဆေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အလေးချိန် လျော့တဲ့ ပြဿနာ တွေ
လျော့နည်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဈေးထဲမျာ ရောင်းကြတာမဟုတ်ဘဲ လမ်းတွေပေါ် မှာ ဖြစ်သလို ရောင်းနေကြတာကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအပြင် အဲဒီ အနီးအနားက နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ရပါတယ်။
စည်ပင်က ဘယ်လိုပဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ် ဆိုပါစေ။ သားငါးအနံ့နဲ့ အသီးအရွက်အပုပ်နံ့တွေက အမြဲ စွဲကျန်ရစ်တာကြောင့် ဒီအနံ့တွေကို နေ့စဉ် ရှူရှိုက်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုပြုပြီး ရောင်ချမယ့် ဈေးတွေ ဖော်ဆောင်ပေးစေလိုပါ တယ်။
လူတိုင်း၊ အိမ်ထောင်စုတိုင်း၊ မိသားစုတိုင်းဟာ နေ့စဉ် ဈေးနဲ့ မကင်းနိုင်ကြတဲ့အတွက် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့ ဈေးမှာ ဈေးဝယ်လိုပြီး အလေးချိန်မှန်ကန်စွာ ရောင်းချတဲ့ ဈေးသည်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့လိုတဲ့ အတွက် တာဝန်ရှိသူများက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း ရေးလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14184
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 14, 2016 No comments:
လိုင်းကားပေါ်မှာ မကြည့်ရဲလို့ မျက်စိမှိတ်ပြီး လိုက်ခဲ့ ရတဲ့သူ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်မှာနေတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်စိုး ရေးလိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှာ မကြာခဏ ဖော်ပြနေကျ မထသ ယာဉ်လိုင်းတွေ အကြောင်း ရေးသား ပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် သူရေးတဲ့ အကြောင်း အရာက ဆန်းသစ်နေ တာကြောင့် ဖော်ပြပေး လိုပါတယ်။
စာရေးခဲ့သူဟာ သူ နေ့စဉ်သွား လာရင်း မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရတဲ့ လိုင်းကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ် အပျက်ပေါင်း များစွာကို စုထားပြီး တစ်ပေါင်းတည်း ရေးသား ပေးပို့ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးခဲ့သူဟာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေမယ့် ရုံးမှာ ထိုင်မနေရတဲ့ ဈေးကွက် ရှာဖွေရေး ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်ပတယ်။ သူ့လုပ်ငန်း သဘော သဘာဝ အရ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းက မြို့နယ်တွေကို သွားရောက်ရာမှာ များသော အားဖြင့် လိုင်းကားတွေကို အသုံးပြု ရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပထမဆုံး သူကြုံ ရတာတွေထဲက အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောလိုပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူနေတဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရား မှတ်တိုင်ကနေ ၁၅၇ လိုင်းကားစီးပြီး ရုံးလာပါတယ်။
ကားပေါ်ရောက်တော့ နေရာရတာနဲ့ ကားမောင်း သူနဲ့ ၂ ခုံကျော်မှာ ထိုင်လိုက်တဲ့ အခါ ကားခေါင်းခန်းမှာ မြန်မာသီချင်းနဲ့ အခွေ ဖွင့်ထားတာ တွေ့လိုက်ရ ပါတယ်။ ရှေ့တည့်တည့် မှာမို့ မကြည့်ပေမယ့် မြင်နေ ရတာက မြန်မာနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံက အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတွေ သီချင်းဆိုပြီး ကနေ ကြတာပါ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘောင်းဘီက အတွင်းခံ အသားကပ်၊ အင်္ကျီမပါ၊ ဗလာစီယာနဲ့ ကောကော်ကန်လား ကနေ ကြတာအပြင် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ ဖက်နမ်း၊ နမ်းရှုံ့နေကြတာကို ကြည့်ပြီး ဘေးက လူတွေကို မကြည့်ရဲ တော့ပါဘူး။ အခြား အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတွေလည်း သူ့လို ခံစားနေကြရတာကို မြင်ရပေမယ့် ပိတ်လိုက်ပါလို့ ဘယ်သူမှ မပြော ရဲကြပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကားမောင်းသူက သီချင်းသံ မြူးကြွ ကြွနဲ့ ကားကို အမြန်နှုန်းနဲ့ မောင်းနေသလို စပယ်ယာဖြစ်သကလည်း အကတစ်ဝက် လေသံမာတဝက် နဲ့ တစ်လမ်းလုံး ဟိန်းဟောက်နေတော့ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ပြီး မဖြစ်ချင်ကြလို့နဲ့ တူပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မဖွင့်သင့် မပြသင့်ပါဘူး။
၁၅၇ လိုင်းမှာတင်မကပဲ အဓိပတိလိုင်းတွေမှာလည်း တီဗွီမပါပေမယ့် အသံအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး ဆူညံနေတဲ့ သီချင်းတွေကို ကားပေါ်တက်စကနေ မိမိခရီးစဉ်ဆုံးသည်အထိ နားမထောင်ချင်ဘဲ ပူလောင်အိုက်စပ်တဲ့ ဒုက္ခကိုခံရင်း နားထောင်နေကြရတာပါ။ အကုန်လုံးမဟုတ်ပေမယ့် စပယ်ယာအ တော်များများကတော့ အပြောအဆို မယဉ်ကျေး ကြတာကြောင့် ခရီးသည်တွေမှာ ပိတ်ပေးဖို့ မပြောရဲ ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်တော့ အဝေးပြေးကားမဟုတ်ဘဲ မြို့ထဲပြေးဆွဲနေတဲ့ လိုင်းကားတွေမှာ ဒီလိုမျိုး တီဗွီပြတာ၊ သီချင်းတွေ ဆူညံနေအောင်ဖွင့်တာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ မဖြစ် လို့ ပူပြင်တဲ့ နေရောင်အောက်မှာ သွားလာနေကြရတာပါ။ ဒီလို ဆူညံတဲ့ အသံတွေကြောင့် မလိုလား အပ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
နောက်ထပ် လိုင်းကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးချင်တာက လိုင်းကားတွေဟာ မိမိသတ်မှတ် လမ်းကြောင်းအတိုင်း မပြေးဆွဲကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကို ပြောရရင် မင်္ဂလာဈေး ကနေ လမ်း ၄၀ မှတ်တိုင်းကို ၃၃ လိုင်းကား စီးပါတယ်။ ၄၆ လမ်းမှတ်တိုင်ပြီးရင် လမ်း ၄၀ ပါ။ ၄၆ လမ်းမှတ်တိုင် ရပ်ပြီးလို့ သိမ်ဖြူမီးပွိုင့် လည်းရောက်ရော အနော်ရထာလမ်းအတိုင်း ဆက်မ သွားဘဲ ညာဘက် သိမ်ဖြူလမ်းဘက်ကို ချိုးကွေ့လိုက်လို့ ကျွန်မ လမ်း ၄၀ မှာ ဆင်းမှာ ဘယ်ကိုသွား နေတာလဲ မေးတော့ ကားပိတ်မှာစိုးလို့ ဒီဘက်က ကွေ့သွားမှာ ဘားလမ်းမှတ်တိုင်မှ ဆင်းဆိုပြီး ဗိုလ်မင်းရောက်လမ်းကနေ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမကြီးဘက်ကို သွားလို့ ဘားလမ်းမှတ်တိုင်မှ ရပ်ပေးပါ တယ်။
တကယ်ဆို မီးပွိုင့်က ခဏလေး စောင့်ရတာဖြစ်ပြီး ခရီးသည်တွေ အခက်အခဲဖြစ်လို့ နေပူထဲ လမ်းအဝေးကြီး ပြန်လျှောက်ရမှာကို မစာနာဘဲ စိတ်ထင်သလို ပြုမူတဲ့ ယာဉ်မောင်းနဲ့ ယာဉ်နောက် လိုက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကြောင့်လည်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှု အများအပြားဟာလည်း ယာဉ်လုပ်သားတွေရဲ့ မဆင်ခြင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါ တယ်။
ဒီလို သတ်မှတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း မမောင်းတဲ့ ယာဉ်လိုင်းကတော့ ၃၃ လိုင်း တစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ဘဲ လိုင်းအတော်များများမှလည်း အမြဲတွေ့နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီး အေးချမ်းသာယာဖို့ လူဆိုး၊ သူခိုးတွေကို နှိမ်းနှင်းရုံနဲ့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘဲ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပြုကျင့်လုပ်ဆောင်နေ ကြတဲ့ မော်တော် ယာဉ်လိုင်းက ယာဉ်လုပ်သားတွေကိုပါ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်မှသာ ခရီးသွားပြည်သူများ စိတ်အေးချမ်းမြေ့နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ တိကျတဲ့ စည်းကမ်းဥပဒေတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ပေးသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုစာ ရေးသားပေးပို့လာတဲ့ စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14013
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, May 10, 2016 No comments:
Taxi ယာဉ်မောင်းနဲ့ စီးတဲ့ ခရီးသည် ဘယ်လို တွေးမိကြပါလိမ့်
မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို ရောက်ရှိ လာတဲ့ ပေးစာများ ထဲမှ တင်ပြပုံ မတူပေမယ့် အကြောင်း အရာတူတဲ့ အတွက် စာနှစ်စောင်ကို တစ်ပေါင်းတည်း ဖော်ပြ လိုပါတယ်။ သူတို့ရေးလိုက်တဲ့ အကြောင်း အရာကတော့ Taxi လို့ခေါ်တဲ့ အငှားယာဉ်များ အကြောင်းဖြစ်ပြီး တစ်ဦးက ယာဉ်မောင်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဦး ကတော့ အငှားယာဉ် စီးတဲ့ ခရီးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ ခရီးသည် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အနောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ အလုံမြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်သီတာခိုင် ရေးလိုက်တဲ့ စာကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
စာရေးခဲ့သူဟာ ဌာနဆိုင်ရာ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သက်ပြည့်မဟုတ်ဘဲ ဆေးနဲ့ အငြိမ်းစားယူခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အခြားရောဂါနဲ့ ဒူးနာရောဂါကြောင့် အပြင်ကို ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ သွားရင် မှတ်တိုင်ကနေ စီးရတဲ့ လိုင်းကားကို မစီးနိုင်ဘဲ Taxi ပဲ အမြဲစီးနေရသူ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကားငှားတဲ့အခါ တစ်ခါတည်းနဲ့ ဘယ်တော့မှ အဆင်မပြေဘဲ ၃-၄ စီး ဈေးပြောပြီးမှ အဆင်ပြေ တက်ပါတယ်။ အဆင်မပြေတာကတော့ ဈေးနှုန်းပါ။ အမြဲစီးနေသူဖြစ်တဲ့အပြင် ဒီနေ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်း တွေကို သိနေလို့ တန်ရာတန်ဖိုး ပြောပေမယ့် အချို့အငှားယာဉ်တွေဟာ အဆမတန် ပိုလိုချင်တက်ကြ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူနေတဲ့ အလုံ ၄ လမ်းနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားဆိုတာ အလုံလမ်းအတိုင်းသွားရင် နီးလို့ အရင် ၁၀၀၀ ကျပ်လောက်ပဲ ပေးလိုရရတာကို ကားသမားတွေက ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀ ကျပ် တောင်းကြပါတယ်။ ဈေးဆစ်ရင် အချို့ကားသမားတွေကတော့ ၁၅၀၀ ကျပ်နဲ့ လိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ရန်ကုန်မြို့ထဲက အလုံနဲ့ နီးနီးလေးကို ၂၅၀၀-၃၀၀၀ တောင်းကြပါတယ်။ သူတို့ကို ပြောရင် လမ်းပိတ်တယ်ဆိုပြီး ကျသင့်တာထက် ပိုယူနေကြပါတယ်။ အငှားယာဉ်စီးတဲ့ ခရီးသည်တိုင်းဟာ ဘဝင်မြင့်လို့ ငွေပေါနေလို့ ငှားစီးကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအခြေအနေ အရပ်ရပ် တွေကြောင့် ၂၀၀ ကျပ်ပဲ ပေးရတဲ့ လိုင်းကားမစီးဘဲ အငှားယာဉ် ငှားစီးကြတာပါလို့ ရေးပါတယ်။
အငှားယာဉ်တွေကို ဈေးနှုန်းတစ်ပြေးညီ ဖြစ်အောင်လို့ အစိုးရအဆက်ဆက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ တာတွေ ကြုံဖူးပါတယ်။ တကယ်မထိရောက်ပဲ ဟန်ပြသက်သက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ အငှားကား တွေမှာ မီတာတပ်ရမယ်ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တုန်းက တိကျတဲ့ ကျသင့်ငွေပေးရတော့မယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ဖူးပါ တယ်။ ပြီးတော့ အငှားယာဉ်တွေ အချို့မှာ တပ်ဆင်ထားတာ တွေ့ပေမယ့် ဘာမှ ဖြစ်မလာသလို နောက်တော့လည်း ပြန်ဖြုတ်ထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ မလွဲမရှောင်သာလို့ အငှားယာဉ် ငှားစီးရသူ တွေအတွက် ကားတွေမှာ မိတာတပ်ပြီး ကျသင့်ငွေ ပေးရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပိုတောင်းတဲ့ ကားသမားတွေကိုလည်း ဈေးစစ်စရာမလိုဘဲ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ စီးရတဲ့အတွက် ပြည်သူ တွေက တာဝန်ရှိသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရေးလာခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်စောင်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မျာ နေတဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးမြစံ ဖြစ်ပါတယ်။
သူရေးလာတဲ့စာမှာ သူဟာ အငှားယာဉ်မောင်းတစ် ဦးဖြစ်ပြီး မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူကဏ္ဍကို ဖုန်းကနေ ဖတ်ရတဲ့အတွက် သူတို့ အငှားယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ အခက်အခဲကို တာဝန်ရှိသူတွေသိအောင် ဖော်ပြလိုတဲ့အတွက် စာရေးခဲ့တာကို ဖော်ပြပေးစေလိုပါ တယ်တဲ့။ သူ Taxi မောင်းတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သလို ခရီးသည်ပေါင်းများစွာနဲ့လည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ Taxi ယာဉ်မောင်းတွေမှာလည်း လူအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် Taxi တွေအပေါ် အဆိုးမြင်နေသူတွေကို လည်း သိစေချင်သလို တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း သိစေချင်လို့ ဒီစာကို ရေးတာဖြစ်တယ်လို့ ရေးပါ တယ်။ သူတို့ Taxi မောင်းသူတွေအနေနဲ့ အုံနာခ၊ ဆီဘိုးနဲ့ ပြုပြင်စရိတ်တွေအတွက် ခရီးသည်တွေ အများဆုံး စီးတက်တဲ့ အချိန်တွေမှာ အပြေးအလွှား ဆွဲရပါတယ်။ ဒီနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့်ကို အများသိဖြစ်နေလို့ မပြောတော့ပါဘူး။ Taxi သမားမှာလည်း လူအမျိုးမျိုးမို့ အချို့က ယူသင့်တဲ့နှုန်းကိုပဲ တောင်းကြပေမယ့် အချို့ကတော့ လိုတာထက် ပိုတောင်း တက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောကရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မကောင်းသတင်းက ပိုပြီး ကြီးမားတက်တာမို့ Taxi သမားဆိုရင် ဈေးပိုတောင်းတက်တယ်လို့ ထင်နေ၊ ပြောနေကြတာကို မဟုတ်ဘူးလို့တော့ မငြင်းလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Taxi သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲကိုလည်း ခရီးသွား ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စာနာနားလည်ပေးစေလိုပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ကားတွေပိတ်နေလို့ မိနစ် ၂၀ လောက်နဲ့ မောင်းရင်ရတဲ့ ပန်းဆိုးတန်းနဲ့ ရန်ကင်းကို ၁ နာရီခွဲကျော်ကျော် ဘီးတလိမ့်ချင်း မောင်းနေရတဲ့ Taxi တွေကို ကားမပိတ်အောင် ဘယ်သူတွေက လုပ်ပေးမှာလဲဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ Taxi ကားတွေ အဆမတန် များပြားလာလို့ ကားသမားတွေမှာ ခရီးသည် ရဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ လျှောက်ပတ်မောင်းနေရင် ကုန်မယ့် ဆီကိုလည်း စဉ်းစားရပါတယ်။ Taxi ယာဉ်ရပ် နားစခန်းက သတ်သတ်မှတ်မှတ် တိတိကျကျ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရောက်တဲ့နေရာမှာ ခဏရပ်နေရင် ကရိန်းကားက လာဆွဲလို့ မကြာခဏ ဒဏ်ငွေဆောင်နေရတဲ့ Taxi ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ ဘဝကို တာဝန် ရှိသူများ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အနေအထားနဲ့ Taxi ဘယ်နှစ်စီး ရှိသင့်တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ပြေးဆွဲစေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ကားပ်ိရတဲ့ အကြောင်း အရင်းက လမ်းပေါ်မှာ Taxi တွေ အဆမတန် များပြားနေလို့ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလည်း ပါဝင်တာကို သူ့အနေနဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ခရီးသည်က ပြည်သူဖြစ်သလို ယာဉ်မောင်းက လည်း ပြည်သူပါပဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝကို ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ ယာဉ်မောင်းတွေ ရဲ့ ဘဝကိုလည်း ပစ်ပယ်မထားဘဲ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားပေးပြီး သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ စီမံပြဌာန်းသင့်ပါကြောင်း တင်ပြလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/13808
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 04, 2016 No comments:
ကားဟွန်းတီးတဲ့ သူတွေကို အရေးယူပေးပါလား
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်၊ သင်္ကန်းကျွန်း မြို့နယ်မှာနေတဲ့ ဒေါ်သစ်သစ်ထွန်းက မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို မေးလ်နဲ့ စာတစ်စောင် ပေးပို့ လာပါတယ်။
သူ့စာထဲမှာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်း အရာ ကတော့ ဟွန်းသံ ကင်းမဲ့ဇုန်တွေ သတ်မှတ် ထားပေမယ့် မလိုက်နာ ကြတဲ့ ကားမောင်း သူတွေ အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လို အရေးယူ ကြမလဲ ဆိုတာကို အကျယ် တဝင့် ရေးသားပေးပို့ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
စာရေးပေးပို့သူဟာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင်္ကန်းကျွန်း လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး ပေါ်မှာ နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူနေတဲ့ အိမ်ခန်းဟာ သင်္ကန်းကျွန်းဈေးကြီးနဲ့ လည်း နီးနေတော့ လေးထောင့်ကန် လမ်းမကြီးပေါ်က ကုန်စိမ်းညဈေးကို လာတဲ့ကားတွေ၊ ဥဒဟို သွားနေကြတဲ့ ကားကြီး၊ ကားလတ်၊ ကားသေးတွေဟာ နေ့ဖတ်သာမက တစ်ညလုံးလည်း မောင်းနှင် နေကြတဲ့ ကားစက်သံတွေကြောင့် အမြဲလို ဆူညံနေတက်ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး ဆူညံတာကတော့ လမ်းမကြီးပေါ် ဖြတ်သွားတဲ့ ကားအတော်များများဟာ ဟွန်းသံတညံညံနဲ့ မောင်းနှင်နေကြလို့ အသက် ကြီးသူ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်ဘူး မဆိုထားနဲ့ သူ့လို အသက် ၃၀ မပြည့်သေးသူတွေတောင် အိပ်မရ ဖြစ်ပြီး မကြာခဏ နိုးနေလို့ ကျန်းမာရေးမကောင်း ဖြစ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူနေတဲ့ လမ်းပေါ်မှာတင် ကားဟွန်းသံတွေ ကြားရတာမဟုတ်ဘဲ ရုံးအသွားအပြန် လိုင်းကား စီးရတဲ့အခါမှာလည်း ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား၊
ရေဒီယိုတွေမှာ ဟွန်းသံကင်းမဲ့ဇုန်တွေ သတ်မှတ်တာကို ဖတ်ထား ကြားထားဖူးတဲ့ သူ့မှာ ကားဟွန်းသံတွေ ကြားရ တိုင်း အရေးယူတာ မတွေ့ဖူးလို့ စိတ်ထဲမှာ အမြဲပဲ ဒေါသဖြစ် မိပါတယ်။
မလိုအပ်ဘဲ ကားဟွန်းတီးတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံချက်တွေချပြီး အရေးယူစေချင်ပါတယ်။ မနေ့က သူရုံးသွားရင်း ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်နားမှာ အနော်ရထာလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကား တစ်စီးဟာ မီးပွိုင့်မိနေလို့ ကားတွေရပ်ထားတုန်း ဟွန်းသံ တတီတီ တီးနေလို့ ဘာကြောင့်လဲလို့ ကြည့်မိတော့ ပန်းဆိုးတန်း မီးပွိုင့်တွေ့စဉ်က သူ့ရှေ့ကနေ ကျော်တက်ပြီး လမ်းကြောင်း ယူသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီကား တစ်စီးကို မကျေနပ်လို့ ဟွန်းတတီတီ တီးပြီး ရန်စနေတာပါ။
တဖက်ကားကလူက ဒါကို သိလို့ အခြားလိုင်းဘက်ကို ကားကို ပြောင်းပြီး တီးသူကားနဲ့ ဝေးအောင် ရှောင်သွားတာ တွေ့ရပါ တယ်။ ရှောင်သွားတဲ့ကားကို မမြင်ရတော့လည်း ဆက်ပြီး ဟွန်းတီးနေဆဲဆိုတာကို သူစီးတဲ့ လိုင်းကားနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရပ်နေတာကြောင့် မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ ရပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ပန်းဆိုးတန်းမီးပွိုင့်မှာ တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲ ရှိတာ ကားတွေရပ်နေတာနဲ့ သိပ်မဝေးတာကို လာပြီး အရေးယူရင် ရတာကို ဆူးလေမီးပွိုင့်ရောက်တဲ့အထိ ဆူညံနေတာကို အရေး မယူဘူး။
ဟွန်းသံဆူညံလို့ အခြားသူတွေ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာကို ဟွန်းမတီးရလို့ ဥပဒေ ထုတ်ထားရက်သားနဲ့ လုပ်နေကြသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးစေချင်ပါတယ်။
ယာဉ်ထိန်းရဲနဲ့မှ မလုံလောက်ရင် အခြား မထသလို အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ အကူအညီယူပြီး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အသံဆူညံလို့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ထိရောက်စွာ လုပ်ပေးစေလိုကြောင်း ရောလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြလိုက်ရ ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/13682
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြရမှာက ရန်ကုန်တိုင်း မထသ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်၊ တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်ခင်အေးသိန်းက မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို မေးလ်နဲ့ စာတစ်စောင် ပေးပို့ လာပါတယ်။
သူ့စာထဲမှာ ရေးထားတာက အခုအချိန်မှာ အစိုးရသစ် ပြောင်းလဲ ခဲ့သလို အချို့လုပ်ုငန်းနဲ့ ဌာနတွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ စတင်နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ပြောင်းလဲမှု မရှိသေးတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း မထသ ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေ ချင်တာကြောင့် ယခုလို စာရေးပေး ပို့ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူဟာ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရုံးလုပ်ငန်းရဲ့ သဘာဝအရ အချိန်ပိုဆင်းရလေ့ ရှိတဲ့အတွက် နေ့စဉ် သူ ၇ နာရီနီးပါးမှ ရုံးဆင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ရုံးတက်ရုံးဆင်းမှာလည်း ကြိုပို့မရှိတဲ့ အတွက် မထသလိုင်း ယာဉ်လိုင်းများကိုပဲ နေ့စဉ် စီးပြီး သွားလာနေရသူ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့ရုံးက ပန်းဆိုးတန်းကားဂိတ်နဲ့ နီးပေမယ့် ရုံးဆင်းချိန်ဆိုရင် ပန်းဆိုးတန်းကားဂိတ်မှာ ကားတွေက အစဉ်အမြဲ ပိတ်ဆို့နေပြီး ရပ်စရာ နေရာမရှိတဲ့အတွက် လမ်းအလယ်ကသွားတဲ့ စီးမယ့်ကားကို ကားကြိုကားကြားကနေ သက်စွန့်စံဖျား အပြေးအလွှား စီးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယာဉ်ရပ်နားဖို့ကျယ်တဲ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ ကားဂိတ်ကို ပြောင်းပြီး ကားစောင့်စီးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ ကားဂိတ်ကလည်း ပန်းဆိုးတန်းဂိတ်နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ ဆူးလေဘုရားလမ်း ကလာတဲ့ ကားနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအတိုင်း ဆူးလေကို ကွေ့ပြီး လာတဲ့ကားတွေဟာ ပန်းခြံရှေ့နားမှာ မရပ်ကြဘဲ ကွေ့နားမှာပဲ စုပြုံရပ်နေကြတဲ့အတွက် ကားတွေရပ်ဖို့ အဆင်မပြေတာကြောင့် ကားစီးမယ့် ခရီးသည်တွေဟာ ပြေးလွှားပြီး ကိုယ်စီးမယ့်ကားဆီကို သွားကြရပါတယ်။
အလင်းရောင်မရှိတော့တဲ့ နေဝင်ချိန်ဆို ကားတွေကို မမြင်ရတဲ့အတွက် စီးမယ့်ကားက လွတ်သွားပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းကြရပြန်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်သွားတဲ့ တက္ကစီကားတွေ၊ လိုင်းကားတွေဟာ ပန်းခြံရှေ့နားမှာ မိုးချုပ်တာနဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်ပြီး လူခေါ်တင်နေတဲ့အတွက် အခြားလိုင်းကားတွေမှာ ရပ်ဖို့ အဆင်မပြေသလို စီးမယ့် ခရီးသည်တွေမှာလည်း အခက်အခဲ ဖြစ်ရတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
သူပြောချင်တာက မော်တော်ယဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး(မထသ)ကြီးကို ဖွဲ့ထားပါလျက် ဒီအဖွဲ့က အုပ်ချုပ်သူနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ဘာလုပ်နေကြလဲလို့ ခရီးသွား ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ သိချင်ပါ တယ်။ အခု မြင်နေတာက ယာဉ်လိုင်းတွေဟာ ယာဉ်ထိန်းရဲကလွဲရင် ဘယ်သူ့မှ ဂရုထားစရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ တွေ့နေရလို့ ဒီစာကို ရေးတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မိုင်နှုန်း ကန့်သတ် ထားပါလျက်နဲ့ မောင်းချင်သလို မောင်းတယ်။ ကားမှတ်တိုင်တွေမှာ အကြာကြီး ရပ်ချင်သလို ရပ်တယ်။ ထွက်ချင်တဲ့အချိန်မှ ထွက်တယ်ဆိုတာ ခရီးသွားပြည်သူတွေကို စော်ကားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင် မထသကို ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ကားဂိတ်တွေမှာ အချိန်မှူး လုပ်သူတွေ လည်း မနက်ကနေ ညနေ ၅ နာရီလောက်အထိပဲရှိပြီး သူတို့ကြည့်လိုက်ရင် ကားတွေက ၂၀၀ တန် တစ်ရွက်ကို ယူတာကလွဲပြီး ကားတွေပိတ်နေလို့ ရပ်နေကြတာလို့လည်း ဘာမှ ပြောကြတာ မတွေ့ဖူး ပါဘူး။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကော်မတီတွေဖွဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအများကြီး ခန့်ပြီးနေကြတာက ဘဏ္ဍာငွေတွေ အလဟသ ဆုံးရှုံးပါတယ်။ မထသရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဘယ်လောက်ထိရောက်သလဲဆိုရင် သင်္ကြန် မှာ မြို့တွင်း မထသယာဉ်တွေ ယာဉ်စီးခ ၂၀၀ လမ်းကို ၁၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ်။ အဝေးပြေး မထသဆိုရင် တသောင်းကျတဲ့ လမ်းခရီးကို ၂ သောင်း ပေးရပါတယ်။
ကျူးကျော်တို့၊ လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကို လျော့နည်းပပျောက်အောင် လုပ်မယ့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်း သူတို့ထက်စာရင် အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မထသကို ဖျက်သိမ်းပြီး အခြားပုံစံတစ်နည်းနဲ့ အစားထိုး ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဖျက်သိမ်းရင်လည်း အုပ်ချုပ်မှုပြောင်း လဲတဲ့ ပုံစံ ပြုလုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်။
ခရီးသွားပြည်သူတွေမှာ နေ့စဉ် ခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ အခက်အခဲကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ ပြုလုပ်ပေးပါလို့ ခရီးသွားပြည် သူများရဲ့ကိုယ်စား ရေးလာတဲ့စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/13612
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ တောင်ငူ ခရိုင်၊ တောင်ငူ မြို့မှာနေတဲ့ ဒေါ်ခင်စန်းဝင်းက မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို စာတစ်စောင် ပေးပို့ လာခဲ့ ပါတယ်။
သူရေးလိုက်တဲ့ စာထဲမှာ သူဟာ အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းတစ် ဦးဖြစ်ပြီး စာဖတ် ဝါသနာပါတဲ့ အတွက် နေ့စဉ် သတင်းစာနဲ့ အပတ်စဉ် ဂျာနယ်များကို ဖတ်ရှုသူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ သူဖတ်လိုက်ရမိတဲ့ ကြေးမုံ သတင်းစာက မှုခင်းသတင်း တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိပြီး စာရေး ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် ရေးသားပြီး မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို ပေးပို့ခဲ့တာ ပါလို့ ပြောပါတယ်။
ကြေးမုံသတင်းစား ဧပြီ ၂၁ ရက်စွဲနဲ့ စာမျက်နှာ ၁၈ မှာ ထမင်းစားရင်း လင်မယားချင်း စကား များရာမှ ဓားဖြင့်ထိုး၍ အထက်တန်း သူနာပြု သေဆုံး ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းမှာ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ တောင်ငူ ခရိုင်၊ ဖြူးမြို့ ဆေးရုံးဝင်း ဝန်ထမ်း လိုင်းခန်းမှာ လင်မယား ထမင်းစားရာမှ ရန်ဖြစ် စကားများ ပြီး လုံးထွေး သတ်ပုတ် ရာမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အရိုးအသွား ရှစ်လက်မခန့် ရှိတဲ့ ဓားနဲ့ ထိုးခဲ့လို့ ဇနီးဖြစ်သူ အထက် တန်း သူနာပြု အမျိုးသမီးဟာ နေရာမှာပဲ သေဆုံး သွားခဲ့ရတဲ့ သတင်းဖြစ် ပါတယ်။
ဒီသတင်း ကို ဖတ်ပြီး အရင်လက စစ်ကိုင်းတိုင်းက မြို့နယ်တစ်ခုရဲ့ ရွာတစ်ရွာ မှာလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူက စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးကို ဓားနဲ့ ခုတ်လို့ ခေါင်း တစ်ခြား ကိုယ်တစ်ခြား ဖြစ်နေတဲ့ ပုံနဲ့ သတင်းကို လည်း ဖတ်လိုက်မိတာ သတိရမိပါတယ်။
ဒီလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အနိုင်အထက် ပြုကျင့်တာ အကြမ်းဖတ်တာ ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သတင်းများကိုလည်း မကြာခဏ ကြားနေရ တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဒီလို မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်မြင်မိတာကြောင့် ဒီစာကို ရေးခဲ့တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အနိုင်အထက် ပြုကျင့် အကြမ်းဖက်ခြင်းသာမက တော့ပဲ ချစ်သူ ရည်းစားတွေမှာလည်း အမျိုးသားဖြစ်သူက အမျိုးသမီးဖြစ် သူကို အနိုင် အထက်ပြုကျင့် အကြမ်းဖတ် တာတွေ ပြုလုပ်လာကြတဲ့ သတင်းတွေကို မကြာခဏ သတင်းစာနဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်ရပါတယ်။
တော်ဝင်စင်တာမှာ အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သူ့ရဲ့ ရည်းစားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူက ဓားနဲ့ထိုးလို့ ဆေးရုံရောက်ခဲ့ရတာ၊ ဒဂုံစင်တာမှာလည်း အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး တစ်ဦးကိုပဲ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူက ပထမနေ့မှာ ပါးလာရိုက်ပြီး နောက်နေ့မှာတော့ အမျိုးသမီးငယ် ရဲ့ မျက်နှာကို ကတ်ကြေးနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ ဖတ်ရတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေအတွက် များစွာ စိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်မှာ အခုလိုအချိန်မှာ ဒီသတင်းတွေကို ကြားဖူး ဖတ်ဖူးပါတယ်။ သူတို့ငယ်စဉ်က ဒီလိုမျိုး မှုခင်းအဖြစ်အပျက်တွေ နည်းပါးပြီး မကြားရမိ သလောက်ပါပဲ။ ဒီလိုတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတာကို နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ အောက်ခြေလူထု အဆင့်တွေ ပူးပေါင်းပြီး အဖြေရှာလို့ ဒီလိုမှုခင်းမျိုးတွေ နည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်။
သူ့အမြင်ကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးတွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေပြီး အဲဒီ့အကျိုး ဆက်က လူမှုဆက်ဆံရေး ပေါ်ပေါက် လာတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ အမှုတစ်ခု ဖြစ်လာရင် ဥပဒေ အရ အရေးယူနေလို့ ချည်းအမှုတွေ ပပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရလဲ။ ဒီလို မဖြစ်အောင် ကြိုးတင်ပြီး ဘယ်လို စီမံထားသင့်သလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုအချိန်အခါမျာ ခင်ပွန်းနဲ့ ရည်းစားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို အနိုင်အထက် ပြုကျင့် အကြမ်းဖတ်ရုံတင်မကဘဲ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းခလေးငယ်တွေကို အမျိုးသားကြီးတွေက မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်တာ၊ အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမိးတွေကို အခြားယောက်ျား၊ အမျိုးသားတွေက အဓ္ဓမ ပြုကျင့်တာတွေက တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖတ်နေရပါတယ်။
ဥပဒေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ ဖော်ထုတ်အရေးယူပါ စေ၊ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဘဝမှာ အတိတ်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကို ကျော်လွှား သွားနိုင်ဖို့ ဘဝ မှာ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နေနိုင်သွားဖို့ဆိုတာ မလွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြုံတွေ့ရလေအောင် ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဒီလိုအကြမ်းဖတ်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးလုပ်တဲ့ အမှုတွေအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ပေးပါ။
မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအတွက် ပညာစတင် သင်ကြားတဲ့ အရွယ် ကနေ ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင် ဘွဲ့ရသည်အထိ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အပြုအမူ၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု၊ ကိုယ်ချင်းစားတရားထားမှုတွေ ပညာပေးနိုင်တဲ့ ပညာရေးစနစ်မျိုး အကောင်အ ထည် ဖော်ပေးစေလိုတာကြောင့် မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူကဏ္ဍကို အကြံပြု ရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/13458
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 23, 2016 No comments:
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဖြေရှင်းပေးစေလိုတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲ့ ပြသနာ တစ်ခု
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဦးကြည်ထွန်း ရေးလိုက်တဲ့ စာကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
ဦးကြည်ထွန်းဟာ အငြိမ်းစား စစ်မှုထမ်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စာဖတ် ဝါသနာပါလို့ နေ့စဉ် ထုတ်ဝေနေ တဲ့ သတင်းစာ တွေကို ဖတ်ရသူဖြစ်တဲ့ အပြင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းစာ တစ်စောင်ထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အ သစ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု၊ ရေကြီး ရေလျှံမှု အပါအဝင် ရန်ကုန်မှ ပြဿနာများကို အစွမ်းကုန် ဖြေရှင်းပေး မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ လိုလားသည့် အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းမည်လို့ ရေးထား တာကို ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြသနာ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းပေး စေလိုတာရယ်၊ မဇ္ဈိမ ဒီဂျစ်တယ်သ တင်းစာ အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ အဆင်မပြေ တာတွေကို ဖော်ပြပေးနေ တာတွေကိုလည်း ဖတ်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရယ်တို့ကြောင့် ရေးသားပေးပို့ ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ဆင်ခြေဖုံးလို့ခေါ်တဲ့ မြို့စွန် တွေမှာ စီးပွားရေးသမားအချို့က လယ်မြေတွေကို အကွက်ရိုက်ပြီး ရောင်းချနေတာကို ဝယ်မိသူတွေ အနေနဲ့ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် ရ၊ မရနဲ့ မရဘူး ဆိုရင်လည်း ရောင်းချ သူတွေကို အစိုးရ အနေနဲ့ အရေးယူ မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဝယ်ထားတဲ့ သူတွေကို တရားစွဲ မှာလားဆိုတာ သိချင်လို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ သိအောင် စာရေးပေးပို့ ခဲ့တာပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စာစောင်တွေမှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဆင်းရဲသား အခြေခံ လူတန်းစားများအတွက် ပေ ၂၀×၆၀ မြေကွက်များကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် တာဝန်ယူ ရောင်းချပေးမယ်။
မြေတစ်ကွက်ကို ၁၀ သိန်း ကျပ်နှုန်းနဲ့ ရောင်းချမယ် ဆိုတာ ဖတ်ရတယ်။ ရောင်းမယ့်နေရာက မင်းနေတဲ့ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် ထဲမှာမို့ လာစုံစမ်းတာ ဆိုပြီး သူငယ်ချင်း ရဲဘော်ဟောင်း တစ်ယောက် ရောက်လာ ပါတယ်။
သူလည်း အိမ်ငှားနေရသူ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရင်းနှီးသူ အချင်းချင်း အနီးကပ်နေကြမယ့် စိတ်ကူးနဲ့ နှစ်ယောက်သား ကြော်ငြာမှာ ပါတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပြီး နေရာမေးလို့ သွားခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လှော်ကားကနေ ဝါးတစ်ရာဘက် သွားတဲ့ ကားလမ်း အတိုင်းကနေ သွားကြ ရတာပါ။ ကုမ္ပဏီက အရောင်း ဝန်ထမ်းဆိုသူနဲ့ တွေ့တော့ မြေတစ်ကွက်ရဲ့ တန်ဖိုးက ကြော်ငြာသလို မဟုတ်ဘဲ ၁၃ သိန်း ကနေ ၁၅ သိန်းဖြစ် နေပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း မြေက လယ်မြေလို့ ဆိုတာကြောင့် တပ်က သူငယ် ချင်းတစ်ဦး ပြောဖူးတဲ့ အဖြစ်ကို သတိရ သွားတာကြောင့် ပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို လက်ကုတ်ပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
သူနဲ့ တပ်က အတူ ထွက်ခွင့်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ဦးလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်က ရန်ကုန် တိုင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်မှာ အဲဒီ ကုမ္ပဏီကပဲ ပေ ၂၀×၄၀ ကို တစ်ကွက် ၇ သိန်းနဲ့ ရောင်းတာကို ဝယ်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
နွေမှာ ခြောက်နေပေမယ့် မိုးတွင်းမှာတော့ ပေါင်လယ်ကျော် တဲ့ အထိ ရေမြှုပ်တဲ့ လယ်ကွင်းပါ။ ငွေပေးတဲ့ အချိန်မှာတော့ မြေဂရန်ကျအောင် သူတို့ တင်ထား ပါတယ်။ ၃ လအတွင်း ဂရန်ကျလာမှာ ဆိုပြီး အပြောတွေကောင်းပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ဒီနေ့ အချိန်အထိ ရေရာတာ တစ်ခုမှ မတွေ့ရပါဘူး။
လမ်းမရှိ၊ မီးမရှိ၊ ရေမရှိတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ အိမ်ဆောက်မနေတဲ့ လယ်ကွက်ကို လမ်းစရိန် အကုန်ခံပြီး ကိုယ်ပိုင်တယ် ဆိုတဲ့ မြေနေရာလေးကိုပဲ မကြာခဏ သွားကြည့်နေ ရတယ်လို့ သူငယ်ချင်းပြောတာ သတိရ မိပါတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
သူ့မိတ်ဆွေ ရှေ့နေတစ်ယောက်ပြောတော့ သက်ဆိုင်ရာရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လယ်မြေမှာ နေထိုင်ခွင့် မရှိဘဲ မဆလလက်ထက်မှာ လယ်မြေမှာ အိမ်ဆောက်နေတဲ့ လယ်သမားတွေကို ထောင်ချခဲ့တာ ကြုံဖူးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာသူတစ်ဦးအနေနဲ့ မြေပိုင်၊ အိမ်ပိုင်နဲ့ မနေရရင် နေပါစေ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးတော့ မလုပ်ကြစေချင်ဘူး။ ဝယ်ထားမိသူတွေအနေနဲ့ ငွေကြေးချမ်းသာလို့ ဝယ်ခဲ့ကြမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မရှိဆင်းရဲသားတွေအတွက် ဒီလိုမျိုး ဝယ်ခဲ့မိ တာဟာ သူတို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ ဒါကို အရင်အစိုးရဟောင်းက ဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့ပေ မယ့် အခု ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာတော့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေး စေလို ပါတယ်။
နေခွင့်ပြုလို့ ရရင်ရ၊ မရဘူး ဆိုရင်လည်း ဝယ်ထား သူတွေကို ကုမ္ပဏီက ငွေပြန်ပြီး ပေးတာ၊ နစ်နာကြေး ပေးတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးအောင် အစိုးရ အနေနဲ့ ဆောင်ရွက် ပေးစေ လိုပါတယ်။
ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားပြီး မသိနားမလည် သူတွေကို ရိုက်စား လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို ထိထိ ရောက် ရောက် အရေးယူပေး စေလိုတာကြောင့် မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို ရေးလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြ လိုက်ပါ တယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/13007
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 01, 2016 No comments:
ရေးချင်တာရေးပြီး ပြည်သူတွေ အတွက်လို့ ပြောနေတဲ့ မီဒီယာတွေကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ အလုံ မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ မကေဇင်သိမ်း ရေးလိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
သူရေးလိုက်တာကတော့ သူဟာ စာဖတ် ဝါသနာပါသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သတင်းစာနဲ့ ဂျာနယ်တွေကို နေ့စဉ် ဖတ်ရှုသူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စာရေး ရခြင်း ကတော့ မတ်လဆန်းမှာ ထွတ်ခဲ့တဲ့ ဂျာနယ် တစ်စောင်ပါ သတင်းကို ဖတ်ပြီး သူ့စိတ်ထဲမှာ မရေးရ မနေနိုင် ဖြစ်ခဲ့ တာကြောင့် ရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ ဖော်ပြ ပေးစေချင် ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စာဖတ် ဝါသနာပါသူ ပီပီ မီဒီယာကို နားလည် ထားတာက သတင်းမှန်တွေကို ပြည်သူတွေသိ အောင် ဖော်ပြပေးတာလို့ သိထား ပါတယ်။ အခုထွက် ရှိနေတဲ့ ဂျာနယ် တချို့ဟာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီတဲ့ အရေး အသားနဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို လက်လွတ် စပယ် ရေးသားဖော်ပြ နေတာက မဖြစ်သင့်ပါဘူး လို့ ရေးပါတယ်။
ဖော်ပြတဲ့ ဂျာနယ်ကို တာဝန်ယူထားသူတွေအနေနဲ့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဒီလိုရေးလိုက် ရင် ဒီလိုဖော်ပြလိုက်ရင် လူတွေ စိတ်ဝင်စားမယ်။ ဂျာနယ် ပိုရောင်းရမယ်လို့ ထင်ပြီး ရေးသား ဖော်ပြကြ ပေမယ့် အမှန်တကယ်မှာတော့ စောင်ရေလည်း မတိုးပါဘူး။
လူအများလည်း စိတ်ဝင်စားမှု မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖတ်မိသူရှိရင် ဗဟုသူတမရှိသူတွေက တကယ်ထင်သွားပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူတွေဆိုရင် တော့ မီဒီယာကို ရွံမုန်းပြီး အထင်သေးသွားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေ အများအပြားထဲက သူဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ဥပမာပေးပြီး ပြောလိုပါတယ်။ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာက မျိုးချစ် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ကာကွယ် ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ စကားပြောမယ် ဆိုပြီး ဖော်ပြ ထားတာပါ။
နိဒါန်းမှာ ရေးထားပုံကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။ "နိုင်ငံတော် အာဏာလွှဲဖို့ သိပ်မလိုတော့တဲ့ အချိန်မှာ မျိုးချစ် အမည်ခံ လူတစ်စုက အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ခပ်စိပ်စိပ် ပြုလုပ် လာတာကြောင့် အာဏာ လွှဲပြောင်းမှုကို ထိခိုက်နိုင် မလားဆိုတာ စိုးရိမ်စရာ ရှိလာပါတယ်။
မျိုးချစ်အမည်ခံတွေဟာ မကြာခင် အစိုးရ သက်တမ်း ကုန်တော့မယ့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမာခံ ကေဒါတွေ အဖြစ် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ပေါ်ပေါ် တင်တင် ညွှန်းဆို ထားကြ သလို ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးကို ဆန့်ကျင် သူတွေ အဖြစ် လည်း ကိုယ်စားပြုနေကြပါတယ်လို့ ရေးထားတာ ဖတ်လိုက် ရတော့ သူ့ရဲ့ စာဖတ် အတွေ့အကြုံ အရ ရေးသူဟာ တစ်ခုခု ဘက်ကို အလေးထားပြီး ရေးသားဖော်ပြပေးချင်တာကို သိလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနိဒါန်းမှာပဲ ဆက်ရေးထားတာက ဒီအဖွဲ့ကပဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို မတ်လ ၅ ရက်မှာ ရှစ်ခိုး ဦးခိုက်ကြမှာ ဖြစ်သလို နောက် တစ်နေ့မှာတော့ မျိုးချစ်ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ အမည်ခံ အစည်းအ ဝေးကို နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြီး သူတို့ကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးဖို့ မြန်မာ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်လို့
ရေးထား တာက နိုင်ငံ အတွက် အလွန် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ရေးသူဟာ အတွေးအမြင်ဆောင်းပါး၊ အင်တာဗျူးမဟုတ်ဘဲ တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ လူငယ်တွေကို ဦးတည်ပြီး လူမှုကွန်ရက် ကနေ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ် စည်းရုံးမှုတွေ ပြုလုပ်နေသူ တစ်ဦးကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းတာကို ဖော်ပြ ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အင်တာဗျူးကို အကျဉ်းချုံးပြောရရင်တော့ မျိုးချစ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကို ကာကွယ်ရေး အဓိကထားပြီး လုပ်မယ်။ လက်နက်ကိုင်တွေကို အရန်အင်အားတစ်ရပ်အနေနဲ့ တိုက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာလို့ ရေးမေးထားတဲ့အပြင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ ပြောဆိုညှိနှိုင်းမယ်လို့ ရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး မသိတဲ့သူဆိုရင် တကယ်လား ထင်သွားစရာ ရှိပါတယ်။
သူသိရသ လောက်တော့ သမ္မတကြီးကို ကန်တော့တဲ့ပွဲကို ကာချုပ် မလာတဲ့ အပြင် တပ်က အသိ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးအချို့ကို မေးကြည့်တဲ့ အခါ သူတို့သိတောင် မသိပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဖော်ပြ ထားတဲ့ အင်တာဗျူးကို ဖတ်ပြီး သူ့အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို စိုးရိမ်မိ ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးကြ ပြောကြတာကို ဖေ့ဘုတ်သုံးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ နေ့စဉ် ဖတ်နေလို့ သူသိပါတယ်။
ရေးတဲ့သူ တွေထဲမှာ တကယ့် နိုင်ငံရေးကို နားလည် တက်ကျွမ်းလို့ ရေးကြသူတွေ ပါသလို တချို့တွေဟာ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ မိမိဆန္ဒ၊ မိမိအတ္တကို ရှေ့တန်း တင်ပြီး ဖော်ထုတ်ရေးသားနေကြ တာပါ။
သူဖတ်ရတဲ့ အင်တာဗျူးဟာ အိမ်မက်တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အပြင် မေးသူအနေနဲ့ လည်း မိမိလိုချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်အောင် ရည်ရွယ် နမိတ်ပြမေးခွန်းတွေ မေးခဲ့တာကို အထင်ရှား ပြင်နေရပါတယ်။
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံကို တကယ်ချစ်ပြီး ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် တပ်မတော်ထဲ ဝင်ပါ။ ကျန်းမာရေးကောင်းရင် သတ်မှတ်တဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားကို ပြည့်မီရင် ဝင်လို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အာဏာ လွှဲပြောင်းရေးကိုလည်း နှစ်ဖတ်တာဝန်ရှိသူတွေက အဆင်ပြေအောင် လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီလိုလုပ်ကြတာကို မီဒီယာတွေက အရှိကိုအရှိတိုင်း အမြင်အတိုင်း ဖော်ပြပေးရင် မီဒီယာ တာဝန်ကျေပါ တယ်။
ပြည်သူတွေက တိကျမှန်ကန်တဲ့ သတင်းတွေပဲ ဖတ်ချင်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မဖော်ပြနိုင်အောင် အစိုးရသစ်အနေနဲ့ တားဆီးကာကွယ်ပေးစေ လိုကြောင်း ရေးလာ တဲ့စာကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/12894
အောင်ဘာလေထီ ပြည်သူကို မရောင်းရင်နေပါ အရှက်မခွဲပါနဲ့
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ လှိုင်မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်မြမြစန်း ရေးလိုက်တဲ့ စာကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
စာရေးပေး ပို့ခဲ့သူဟာ ကျောင်းဆရာမ အငြိမ်းစား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဌာန တစ်ခုက ဦးစီး အရာရှိ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၉၀ ကျော် မိခင်ကို ပြုစုဖို့နဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက် ဝန်ထမ်း အဖြစ်မှ စောစီးစွာ အနားယူ ခဲ့ရသူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နယ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မောင်တစ်ဦးရဲ့ လစာကို လစဉ် လဆန်း ၈ ရက်နေ့တိုင်း အင်းဝဘဏ်မှာ ထုတ်ယူဖို့သွားရင်း မဟာဗန္ဓုလလမ်းမပေါ် ၃၇ လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ အောင်ဘာလေ ထီရုံးမှာ ထီထိုးဖို့ သွားရင်း တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို တာဝန်ရှိသူနဲ့ စာဖတ်သူတွေ သိရှိစေဖို့ မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူကဏ္ဍကို စာရေးပေးပို့ ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ စာရေးသူက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့မှာ ဘဏ်ငွေထုတ်ဖို့ အသွား ပန်းဆိုးတန်း ကားမှတ်တိုင် ကားပေါ်က အဆင်းမှာ အောင်ဘာလေ ထီရုံးကို တွေ့တာကြောင့် ထီထိုးချင်စိတ် ဖြစ်ပြီး ထီရုံးကို သွားခဲ့ပါတယ်။
သူရောက်တဲ့အချိန်က ၁၀ နာရီဖြစ်ပြီး ၁၁ နာရီမှာ ရောင်းမယ်ဆိုလို့ ထိုင်စောင့်နေခဲ့ပါ တယ်။ သတင်းစာတွေထဲမှာ လူတစ်ဦးကို ထီအုပ်ရေ ၁၀ အုပ်အထိ လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်တယ် ဆိုပြီး ဖတ်ထားမိတာကြောင့် လူတိုင်း ဝယ်လို့ရမယ် ထင်ခဲ့လို့ပါ။
အပြင်ထီဆိုင်တွေမှာ တစ်စောင်ကို ၃၀၀ ကျပ် ပေးရတာကို ထီရုံးမှာ ၁၁ စောင်ပါ တစ်အုပ်ကို နှစ်ထောင်နဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ ဝယ်ချင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝင်ပေါက်မှာ ဧည့်ကတ်ယူပြီး ၁၁ နာရီမှာ ပုံစံရောင်းတာကို မှတ်ပုံတင်ပြပြီး ပုံစံယူ ဖြည့်လို့ တင်ထားရပါတယ်။ ဒါကို မှတ်ပုံတင်ပြပြီး ပုံစံယူတာကို ထီထိုးပြီးသား၊ ဝယ်ပြီးသား မှတ်ပုံတင်ကို ပစ်ချပါတယ်။
သူက တစ်ခါမှ မဝယ်ဘူးတာမို့ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြတော့မှ မပေးချင်ပေးချင်နဲ့ ပုံစံပေးပါတယ်။ ပုံစံတင်ပြီး တုံကင်ပေးောတ့ ထိပ်ဆုံးကသူက ၁ ဖြစ်ရမှာကို နံပါတ် ၁၀ ပေးပါတယ်။ ၁ ကနေ ၉ အထိ ဘယ်သူမှလည်း ထုတ်တာ မတွေ့ရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အခု မတ်လ ၈ ရက်မှာ လည်း ငွေသွားထုတ်ရင်း ထီရုံးကိုဝင်ပြီး ထီဝင်ဝယ်ဖို့ သွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကလိုပဲ ပုံစံယူပြီး တင်လိုက်တော့ တုံကင်ပေးတဲ့အခါမှာ ငွေသွင်းကောင်တာက အမျိုးသမီးက ပုံစံစာရွတ်ထိပ်မှာ ပုံစံရှင်ဟာ ထီထိုးပြီးသား ရေးလိုက်လို့ တုံကင် မပေးပြန်ပါဘူး။
သူက ထီက တစ်လတစ်ခါ ထွတ်တာ ဖြစ်ပြီး လစဉ်ထို့လို့ရသလို လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းမှာ ရှိနေသ လို သူက ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ ထီထိုးဖူးတာလို့ အကြောက်အကန်ပြောမှ တုံကင်နံပါတ် ၅၀ ကို ပေးတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ထီအုပ်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ သူ စကားများနေတော့ အမျိုးသား ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦး ရောက်လာပြီး တောင်းပန်ပေမယ့် ရှက်စရာ ကောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ထီရောင်းချရာမှာလည်း တုံကင်နံပါတ်က ၅၀ ကနေ ၆၀ ဖြစ်သွားတယ် ထုတ်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။
ဝန်ထမ်းတွေ သူတို့ဖာသာ ပုံစံဖြည့်ပြီး ငွေသွင်းကောင်တာ ဘက် သွားပို့တာ မြင်ခဲ့ရသလို ယောက်ျား အမျိုးသားကြီးတွေက အမျိုးသမီး မှတ်ပုံတင်တွေနဲ့ လာဝယ်တာ ကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။
အပြင်ထီဆိုင်တွေကို အမြန်ရလို့ ရောင်းဖို့အတွက် ပြည်သူ တွေ ထီရုံးမှာ လာမဝယ်အောင် ဒီလိုမျိုး လုပ်နေတာလို့ ထီရုံးကို လာဝယ်တဲ့သူတစ်ယောက်က ပြောတာ ကြားရတော့ သူ့ကို လာမဝယ်ချင်အောင် အရှက်ရအောင်လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အံ့သြမိ ပါတယ်း။
တာဝန်ရှိသူတွေက ထီဈေးတွေ မတက်အောင်လို့ အစီအစဉ်တကျ လုပ်နေတာကို ဝန်ထမ်း တွေက သူတို့ အပိုဝင်ငွေရအောင် လုပ်တာကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ရေးပါတယ်။
တစ်ခါမှ မဝယ်ဘူးတဲ့ သူ့ရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကိုကြည့်ပြီး တစ်ခါတည်း တန်းပြီး ဝယ်ပြီးသားလို့ပြော တဲ့ ဝန်ထမ်းနဲ့ ပုံစံစာရွတ်မှာ ရောင်းပြီးသားလို့ ရေးလိုက်တဲ့ ဝန်ထမ်းက မှတ်တမ်းမှတ်ရာ မရှိဘဲ အကြားအမြင်ရသလို ပြောလိုက်တာ ထီဝယ်သူကို မထေမဲ့မြင် မချေမငံ ဆက်ဆံတာကတော့ ဘယ်လိုမှ သည်းခံလို့ မရတာကြောင့် သူ ဒီစာကို ရေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူနေတာက လှိုင်မြို့နယ် ၆ မိုင်ခွဲမှာဖြစ်ပြီး သူ့မှာ အိမ်နေရင်း လုပ်လို့ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလည်း ရှိပါတယ်။ ထီ ၁၀ အုပ်ကို ဝယ်ပြီး အပြင်မှာ ပြန်ရောင်းပြီး ရမယ့် အမြတ်က ဘယ်လောက်လည်း ဆိုတာ မသိပေမယ့် ဒီလိုအ လုပ်မျိုးနဲ့မှ ရမယ့်ငွေကိုလည်း သူ မလိုချင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ ဒီလို အရှက်ခွဲ သိက္ခာချခံခဲ့ရ တာကို သေတဲ့အထိ မမေ့ပေမယ့် သူ့စိတ်မှာ သန့်ရှင်းခဲ့တဲ့အတွက် နောက်လတွေမှာလည်း ထီရုံးမှာ သွားပြီး ထီ ၁၀ အုပ်ကို ဝယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ သူ့လို အခြားထီဝယ်တဲ့ ပြည်သူ တွေ အရှက်မရစေဖို့ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတေါကို အရေးယူပေးစေချင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ နိုင်ငံသား အမှတ်နဲ့ ဖုန်း၊ လိပ်စာတို့ကို မဇ္ဈိမ စားဖတ်သူကဏ္ဍကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်လို့ ရေးလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/12274
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, March 14, 2016 No comments:
လွှတ်တော်မှာ တောင်းစားသူတွေ အတွက် ဆွေးနွေးပေး စေချင်တယ်
ရန်ကုန်တိုင်ဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ လှိုင်မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်ဝင်းဝင်းစန်း ရေးလိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
သူရေး လိုက်တဲ့ စာထဲမှာ သူဟာ စာဖတ် ဝါသနာပါသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် သတင်းစာများ ကိုလည်း ဖတ်ရှုသူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ မနေ့က သူ သတင်းစာ တစ်စောင်မှာ ဖတ်လိုက် ရတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်း တစ်ပုဒ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် တောင်းစား သူများကို အများပြည်သူသုံး နေရာများမှ ဖယ်ရှားဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း တောင်းစား သူများ ပပျောက်ရေးကို လုပ်ဆောင်စေလိုတာ ကြောင့် တာဝန်ရှိသူများ ဖတ်မိစေဖို့ အတွက် မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို ရေးသား ပေးပို့ခဲ့ တာလို့ ပြောပါတယ်။
ခရီးသွား ဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဘုရားဖူး သွားရောက်ခဲ့ဖူးပါ တယ်။ သွားခဲ့တဲ့ ဘုရားဖူးခရီးတိုင်းမှာ တောင်းစားသူတွေကို ရှောင်လို့ မလွတ်နိုင် ခဲ့ပါဘူး။
ရွှေစက် တော်၊ ပုဂံ၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း စတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေ သွားရင်း တောင်းစား သူတွေက နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေကို ဝိုင်းအုံပြီး တောင်းနေ ကြတာ မြင်ရင် သူ့စိတ်ထဲမှာ အားနာ ရှက်ရွံ့သလို စိတ်မ ကောင်းသလို ခံစား ရမိတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တောင်းစားသူများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေ ကို သူ အသေအချာ မသိပေမယ့် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ သတင်းမှာ တောင်းစားသူများကို တရားမ ဝင်ကြောင်း၊ ကြေညာမယ့် ဥပဒေနဲ့ လမ်းများမှာ တီးမှုတ်တီဆို ဖျော်ဖြေပြီး သွေတောင်း သူများဟာ လိုင်စင် ကိုင်ဆောင် ထားရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်း ဥပဒေများကို ထိုင်းအမျိုးသား ဥပဒေလွှတ်တော် (NLA) က မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြု လိုက်တယ် ဆိုတာ ဖတ်ရတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အလားတူ ဥပဒေမျိုးတွေ ရှိစေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းလွှတ်တော်က အခု အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဥပဒေသစ်အရ တောင်းစားခြင်းကို ပြစ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး တောင်းစားခြင်းကို အားပေးအားမြှောက် ပြုသူများကိုလည်း အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကိုက်ညီချင်မှ ကိုက်ညီမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဖမ်းဆီးမိတဲ့ ထိုင်း တောင်းစားသူများ ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတက်သင်တန်း တက်ရမယ် ဆိုတာကိုတော့ သဘောကျမိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ လူအချို့မှာ ဘဝရပ်တည်ဖို့အတွက် အစပြုဖို့ ခက်ခဲတက်ပြီး ဘယ်ကစရ မယ်ဆိုတာ မသိကြ သလို ငွေကြေး အရင်းအနှီးနဲ့ နည်းပညာတွေ နည်းလမ်းတွေလည်း အဆင်မပြေ နိုင်ကြတာကို တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ပရဟိတ အသင်းအဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ ပညာပေး စည်းရုံးပေးကျရင် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တောင်းစား သူတွေ လုံးဝ မပျောက်တောင် တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျ လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ဖန်တီးပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ရင် လူ့တန်ဘိုး မြင့်မား လာသလို နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်း တောင်းစားသူတွေ မရှိရင် နိုင်ငံသိက္ခာ ကျဆင်း မှု လျော့နည်းသွားစေနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆတဲ့အတွက် ထိုင်းလွှတ်တော်လိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်မှာလည်း တောင်းစားသူများနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီမံချက်တွေကို ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ကာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်ပေး စေလိုကြောင်း စေတနာနဲ့ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့ စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/12047
ပုဒ်မ ၁၈ ရဲ့ အပြစ်ဒဏ်က ၆ လ၊ စစ်နေတာက တစ်နှစ်ကျော်ပြီ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်း ခရိုင်၊ သန်လျင် မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်အေးအေးခင် (အမည်လွဲ) ရေးးလိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
စာရေးခဲ့ သူဟာ လက်ပံတန်း ကျောင်းသား သပိတ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား တစ်ဦးရဲ့ မိခင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သူရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ ကလည်း ဒီလက်ပံတန်း သပိတ်မှာ အဖမ်းခံ ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိခင် တစ်ဦးရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အမြင်ကို ရေးသား ပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ သားတစ်ယောက်၊ သမီး တစ်ယောက် ရှိတဲ့ မိခင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကွယ်လွန် သွားပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် မုဆိုးမ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့ရဲ့ သားသမီးတွေကို ပညာ တက်ဖြစ်စေချင်လို့ သားကြီးကို တက္ကသိုလ် တက်စေခဲ့ သလို သမီးဖြစ်သူ ကလည်း အခု အခြေခံပညာ အထက်တန်းကို ဖြေဆိုတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သားအကြီးကို လက်ပံတန်း သပိတ်မှာ ဆန္ဒပြမှုနဲ့ သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားတာဟာ အခုဆိုရင် တစ်နှစ် ရှိပါပြီလို့ ပြောပါ တယ်။ သားဖြစ်သူ ဖမ်းဆီးခံ ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရကို အပြစ် မတင်ချင် သလို သားဖြစ်သူကို လည်း အပြစ် မဆိုချင်ပါဘူး။
အစိုးရက အရေးယူချင်လို့ ဖမ်းဆီးတာ ဖြစ်သလို သားဖြစ်သူ ကလည်း သူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့ တာဖြစ်လို့ ဒီလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံရ တယ်လို့ပဲ သဘောထား မိတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ အရပ်သား အတွေးနဲ့ ဆင်ခြင် မိတာက အပြစ်ရှိတယ် ဆိုပြီး ဖမ်းပြီးရင် တရား ရုံမှာ တရားစွဲ စစ်ဆေးလို့ အမိန့်ချဖို့ကို လုပ်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းတဲ့ ပုဒ်မ ၁၈ ကို သူ ဥပဒေ စာအုပ်မှာ လေ့လာတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ပြင်ဆင် ခဲ့တဲ့ ဥပဒေမှာ ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၁၈ သည် မည်သူမဆို ခွင့်ပြုမိန်ရ မရရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ပြုကြောင်း၊ ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသောင်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် စလုံးဖြစ်စေ၊ ချမှတ်ရမည်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
သူနဲ့သိတဲ့ တရားရေး ဝန်ထမ်း၊ ဥပဒေ ဝန်ထမ်းတွေကို မေးကြည့်တော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ပြောပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပြစ်ဒဏ်က ၆ လကို စစ်နေတာက တစ်နှစ်ကျော် တော့မယ် မပြီးသေးဘူး ဆိုတော့ ဒီတရား စီရင်ရေးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးတော့လည်း ပြစ်ဒစ်တွေ ပိုပြီး မများများအောင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျောင်းသားသပိတ် ဖြတ်သန်းတဲ့ မြို့တွေ၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ၂၀၁၄-၁၅ အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား သပိတ် လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ထောက်ခံပွဲတွေမှာ ပါတယ်ဆိုပြီး မြို့နယ် အများအပြားမှာ တရားစွဲတော့ သာယာဝတီထောင် ကနေ ရန်ကုန်ကို တစ်ပတ်မှာလေးရက်၊ တစ်ရက်ကို မြို့နယ်တရား ရုံး၊ သုံးရုံးကိုသွားပြီး တရားရင်ဆိုင်နေ ရတာကလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျောင်းသားဆို တာ လူငယ်ဖြစ်ပြီး သူတို့စိတ်ထဲမှာ နိုင်ငံအတွက် လုပ်သင့်တယ်ထင်လို့ လုပ်ခဲ့ကြတာကို အရေးယူမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချမှတ်စေချင် ပါတယ်။
အခု တရားစီ ရင်နေတာက ပဒေသရာဇ်ာခေတ်ကလို တရားခံရဲ့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုပါ ဒုက္ခဖြစ်အောင် လုပ်နေသလို ဖြစ်နေတာကို တာဝန်ရှိသူများ စဉ်းစား ဆင်ခြင်စေလိုပါတယ်။
လူငယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ပါ။ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ခံယူချက်ကို နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချ ဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သူတို့ဘဝ တစ်သက်လုံး နာကျည်းမုန်းတီးစိတ်နဲ့ နလန် မထူနိုင်အောင် လုပ်ဖို့တော မသင့်ပါဘူးလို့ ပြောချင်လို့ မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူကဏ္ဍကတစ်ဆင့် တင်ပြလာ တဲ့ စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/11877
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 03, 2016 No comments:
ပြည်မြို့မှာ အမျိုးသမီးတွေ လမ်းမထွက်ရဲ ကြတာကို သိလား
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်သန်းသန်းဆွေက မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို မေးလ်နဲ့ စာတစ်စောင် ပေးပို့ လာပါတယ်။
စာရေးပေးပို့ခဲ့သူဟာ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ရုံးတက်တဲ့ အခါ သူတို့မြို့ရဲ့ အနေအထား အရ ကိုယ်ပိုင် ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်လို့ ရုံးတက် ရသူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က သူတို့မြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကယ် စီးနင်း လာသူကို ဆိုင်ကယ် စီးလာတဲ့ သူတွေက လုယက် ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်လို့ ရေးလိုက် တဲ့စာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့မြို့ဟာ အရင်က အလွန် အေးချမ်း သာယာခဲ့တဲ့ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက ဖြတ်သန်း စီးဆင်းနေပြီး တောတောင်နဲ့ ဘုရားစေတီ တွေကြောင့် နေ့ချင်စဖွယ် မြို့တော် ဖြစ်တာ ကြောင့် သူဟာ အခြားမြို့ကြီး တွေမှာ အလုပ်မဝင်ဘဲ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာ မှာပဲ အိမ်နဲ့ မခွဲရအောင် လုပ်ငန်း ဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန် အခါမှာတော့ အိမ်ထဲက အပြင် ထွက်ဖို့ကို ကြောက် လာပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ မကြုံရ သေးပေမယ့် ပြည်မြို့မှာ လုယက် တာတွေ များလာ လို့ပါ။ အမျိုးသားတွေ ထက် အမျိုးသမီး တွေမှာ ပိုပြီး တွေ့ကြုံနေ ရတာက ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဆွဲကြိုး၊ ဟန်းချိန်းနဲ့ လက်ကိုင် အိတ်တွေကို သာမက လက်ကိုင်ဖုန်း ကိုပါ လုယက် လာကြ တာပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက်နေ့က သူတို့မြို့မှာ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးထံမှ ရွှေဟန်းချိန်းကို အခြား ဆိုင်ကယ်က အမျိုးသားနှစ်ဦးက လုမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လမ်းလျှောက်သွားရင် အလုခံ ရတာထက် ဆိုင်ကယ်စီးနေစဉ် အလုခံ ရတာက အသက်အန္တရာယ်နဲ့ အလွန် နီးပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ဦးခေါင်းနဲ့ ကိုယ်လက် အင်္ဂါတွေ ထိခိုက် ပျက်စီးပြီး ဒုက္ခိတ ဘဝကို ရသွားနိုင် ပါတယ်။
ကံမကောင်းရင်တော့ အသက်သေဆုံးရတဲ့ အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ ထမင်းစားကြီးတဲ့ လူတိုင်း အသိဉာဏ် ရှိကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သိပေမယ့် အခုလု ယက်နေသူတွေ ဟာ များသောအားဖြင့် လူငယ်တွေ ဖြစ်နေပြီး ခေတ်ပေါ် အသုံးအဆောင်တွေ အသုံးပြု ချင်တာ လောင်းကစား မှုတွေ လုပ်ပြီး ငွေကြေး လိုအပ်နေတာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သုံးစွဲတွဲ အတွက် ငွေကုန် များလာ တဲ့ အခါ အိမ်ကတောင်းမရ၊ ခိုးမရတဲ့ အခါတွေမှာ ငွေအလွန် အမင် လိုအပ်နေ တဲ့ အတွက် ဘာကိုမှ မစဉ်းစားတော့ဘဲ မကြောက်မရွံ့ အလွယ် တကူ ရနိုင်တယ် ဆိုပြီး လုယက်မှုတွေ ကျူးလွန် လာကြ တာဖြစ်တယ်လို့ ရေးပါတယ်။
ဒီလို စာရိတ္တ ပျက်ယွင်းနေတဲ့ လူအချို့ရဲ့ အဆင်ခြင်မဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အေးချမ်းစွာ နေလိုတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ကို ပူပန်စေတဲ့ အပြင် ခေတ်အခြေအနေ အရ အမျိုး သမီးတွေလည်း လုပ်ငန်းခွင် ဝင်းမှ အိမ်မိသားစု အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အနေ အထားကို ပြုပြင်ပြောင်း လဲနိုင်ဖို့လဲ အဖြေ မရှိသေးပါ ဘူး။
ဒီလိုလုယက်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းပြီး ထောင်ချရုံနဲ့လည်း ပြီးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အတွေ့အကြုံ အရတော့ မြန်မာပြည်မှာ ထောင်ထဲရောက် သွားပြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး မကောင်းမှု ပြုလုပ်တဲ့ အတက်မျိုးစုံ တက်လာ တက်ကြတာကို တွေ့ဖူးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးနဲ့ ထောင်ကျသူတွေကို အလုပ် လုပ်စေချင်တဲ့ စိတ်၊ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အရည် အချင်းက ရတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ စားသောက်နေထိုင် မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ပြုပြင်ပြောင်း လဲနိုင်မယ့် အလုပ်စခန်း တွေ သင်တန်းကျောင်း တွေကို ပို့ပြီးမှ လူ့အသိုင်း အဝန်းထဲကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်စေတဲ့ အခြေအ နေမျိုးတွေကို တာဝန်ရှိသူ အစိုးရအနေနဲ့ ဖန်တီးနိုင် ပါမှ လုယက် မှုတွေ ပျောက်ကွယ်မှာပါ။
ကျောင်းပ ညာသင်ယူတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဆုံးတဲ့အချိန်ထိ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ တာဝန်ကို နားလည် သဘောပေါက်အောင် ကလေးအရွယ်ကတည်းက သင်ပေးနိုင်ပါမှ အေးချမ်း သာယာတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်မှာလို့ ရေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ် မှာတော့ ကျွန်မတို့ ပြည်မြို့က အမျိုးသမီး ကြီးငယ်တွေဟာ လမ်းထွက်ဖို့ကို ကြောက်ရွံ့ပြီး မသွားမဖြစ် သွားရတဲ့ အခါ ရင် တထိတ်ထိတ်နဲ့ စိုးရွံ့စိတ်နဲ့ အသက်ရှင်နေ ကြရတာကို တာဝန်ရှိ သူတွေ သိအောင် မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍက တဆင့် ရေးသား ပေးပို့ လိုက်တာပါလို့ ရေးလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/11569
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, February 24, 2016 No comments:
စည်ပင်ပိုင်မြေမှာ ဆိုင်ခန်းဆောက်ရင် အရေးမယူတဲ့ မြို့နယ်ကို ဖော်ပြပေး ချင်ပါတယ်
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်း ခရိ်ုင်၊ ဗဟန်း မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ကိုသီဟအောင်က မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို မေးလ်နဲ့ စာတစ်စောင် ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ ပေးပို့ လာပါတယ်။ သူ့စာထဲမှာ ရေးထားတာ ကတော့ သူဟာ ကျောင်းတက် နေဆဲ ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မြန်မာလူမျိုး တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လူငယ် တစ်ဦးပီပီ နေရာအနှံ့ ရောက်တဲ့ အခါ သူသတိ ထားမိတာက ရန်ကုန်မြို့ စည်ပင်သာယာ နယ်နမိတ် အတွင်းမှာ ကွမ်းယာဆိုင်၊ ကွမ်းယာနဲ့ အတူ စုံစီနဖာ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေကို အများအပြား တွေ့ရ ပါတယ်။
ဒီဆိုင်တွေဟာ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ မြေနေရာတွေမှာ မဟုတ်ဘဲ စည်ပင်ပိုင်တဲ့ မြေတွေမှာ တရားမဝင် ကျူးကျော် ဆောက်လုပ်ပြီး ရောင်းနေ ကြတာ တွေ့နေရလို့ သူ့စိတ်ထဲမှာ သိချင် လာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘယ်သူ့ မေးရမှန်း မသိလို့ မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍ ကျိုရးသား ပေးပို့ခဲ့ တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ် အတွင်းမှာ စည်ပင်က ထုတ်ပြန် ထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေဟာ တစ်မြို့နယ်မှာ တစ်မျိုးစီလား၊ စည်းကမ်းနဲ့ မညီဘဲ စည်ပင်ပိုင် မြေတွေမှာ ဆောက်လုပ် နေတဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ခွင့်ပြုနေသလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
သူနေထိုင်တဲ့ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ စည်ပင်ပိုင်မြေမှာ ဆိုင်ခန်းတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ခွင့်ပြုနေသလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ သူနေထိုင်တဲ့ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ စည်ပင်ပိုင်မြေမှာ ဆိုင်ခန်းကို အခိုင်အခန့် ဆောက်လုပ်ပြီး ရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိပါတယ်။
အရင်က ကွမ်းယာကို တဲလေး ထိုးပြီး ရောင်းတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်က ဘာကိစ္စနဲ့လည်း မသိဘဲ သူ့ကွမ်းယာဆိုင်ကို စကားများကြတာ ကြားရပြီး ဖျက်လို့ ပျောက်သွားတာကို အခုလို အခိုင်အခန့် သံတံခါးတွေ သွပ်မိုး တွေနဲ့ နေရာအကျယ်ကြီးယူပြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။
သူတို့ဆောက်စဉ်ကတည်းက တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက လာရောက် ဟန့်တားမယ် ထင်ထားခဲ့တာ။ အခုချိန်ထိ ဘယ်သူမှ မလာဘဲ ခမ်းခမ်းနားနား ဆောက်ပြီး ရောင်းနေတာကို တွေ့ရလို့ အံ့သြမိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အနှံ့နီးပါးမှာ ဒီလိုဆောက်လုပ်ပြီး ရောင်းချနေကြတာ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြားတွေ များပါတယ်။ အခြားနေရာတွေက ထားပါတော့ အခု သူပြောချင်တဲ့ အဆိုင်နေရာက ဗဟိုဘဏ်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှာ ဖွင့်ထားတာကတော့ စည်ပင်ဥပဒေကို မထေမဲ့မြင် ပြုရာ ကြနေပါတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
စည်းကမ်းမဲ့တဲ့ ဘယ်ဆိုင်မဆို လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သူ့ကိုမ ဆို တိတိကျကျ အရေးယူ ဖယ်ရှားစေလိုတာကြောင့် ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ရေးသား ပေးပို့ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ ကြောင်း ရေးလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/11397
မြို့လယ်ကောင်မှာ လမ်းမပေါ် ကျူးကျော်ရင် ရသလား
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်ဆွေဆွေ တင် ရေးပို့ လိုက်တဲ့ မေးလ် တစ်စောင်ကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ လက်ခံ ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
သူစာထဲမှာ ရေးထားတာ ကတော့ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍကို မကြာခဏ ရောက်ရှိ လာတဲ့ စာတွေထဲ ကလို လမ်းပေါ်မှာ စည်းကမ်းမဲ့ ဈေးဆိုင် ဖွင့်လှစ် ရောင်းချနေလို့ ကားနဲ့ လမ်းခရီး သွားတွေ အခက်အခဲ တွေ့ကြုံနေရ တာကို သိစေချင် လို့ပါလို့ ဆိုပါတယ်။
သူဟာ ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်း သဘာဝ အရ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ဆိုင်တွေကို နေ့စဉ် သွားရောက် ရသူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူသွားတဲ့ လမ်းတွေက များသော အားဖြင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်မှာ ရှိကြပြီး အခြားမြို့နယ်တွေထက် သူနေတဲ့ မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ လမ်းတွေ က ထူးခြားလို့ ပြောပြ ချင်လို့ပါ။ ဘယ်လို ထူးခြားသလဲ ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း အခြား မြို့နယ်များမှာလည်း အိမ်ရှေ့ဈေးဆိုင် တည်ကြတာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်ကတော့ လမ်းမပေါ် အထိ ဈေးဆိုင် တည် ကြပါတယ်။
မိမိ အိမ်ရှေ့ထက် ကျော်လွန်ပြီး လမ်းမပေါ် အထိ ရောင်စုံရွက်ဖျင်း သံကိုင်း အမိုးကြီးတွေနဲ့ ခင်းပြီး ရောင်းကြတာလို့ ပြောပါတယ်။
လမ်းလျှောက်နေတဲ့ သူက ကားနဲ့ ဈေးဆိုင်ကို ရှောင်ပြီး ခက်ခက် ခဲခဲ လမ်းလျှောက် ရသလို ကားကလည်း ဈေးဆိုင်နဲ့ လူတွေကို မနည်း လွတ်အောင် မောင်းကြပေမယ့် မကြာခဏ ထိခိုက် မိလို့ ပြဿနာ ဖြစ်ကြ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လမ်းမကျယ်ကြီး တွေဖြစ်တဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ အနော်ရထာ လမ်းမကြီးတွေရဲ့ ပလက်ဖောင်း မှာ ဈေးဗန်းခင်းပြီး ရောင်းတာကမှ ရှောင်သွားလို့ အဆင်ပြေ ပါသေးတယ်။ အခုဟာက လမ်းကျဉ်းတွေ မှာ အိမ်ရှေ့ဈေးရောင်းတာ၊ လွတ်တဲ့ နေရာမှာ လမ်းထဲ ဈေးရောင်းတာက အခိုင်အခန့် ဆောက်ပြီး နေရာယူထားတဲ့ အတွက် လမ်းသွားဖို့ ကားသွားဖို့နေရာက ကျဉ်းသွားပါတယ်။
မြို့ထဲ သွားလာနေတဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေ ကတောင် လမ်းပေါ် အထိ ဈေးရောင်တဲ့ ဆိုင်တွေကို မမြင်ဖူး လို့လား မသိဘူး ဓာတ်ပုံတွေ တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်နေကြတာကို မကြာခဏ တွေ့မြင်နေ ရပါတယ်။
သတင်းစာနဲ့ ဂျာနယ်တွေ ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း စည်းကမ်း တကျ ရောင်းစေဖို့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ စည်ပင်မှာ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။
အရေးယူရမှာကို မယူဘဲ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေရင် မြန်မာလူမျိုး ထုံးစံ အတိုင်း ရှေ့လူလုပ်တဲ့ အ တိုင်း လိုက်လုပ်နေကြရင် ဘယ်အစိုးရ တက်တက် စည်းကမ်း ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတော် ဖြစ်လာ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် မြို့တော် သန့်ရှင်းရေး အတွက်၊ ကျော်တံတားမြို့နယ် သန့်ရှင်းသာယာ ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းပေးပါလို့ မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူ ကဏ္ဍမှ တဆင့် တင်ပြ ပါတယ်လို့ ရေးလာတဲ့ စာကို ဖော်ပြ လိုက်ရပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/11215
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 16, 2016 No comments: